အမျိုးသားကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2007) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ် Porn
Horm ပြုမူနေ။ 2007 ဇွန်လ; 52(1): 45-55 ။ FULL သငျတနျး
2007 ဧပြီလ 19 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.yhbeh.2007.03.030
Elaine အမ် Hull နှင့် Juan အမ် Dominguez
တိကျသောအပြုအမူပုံစံများအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ပေမယ့်သုတ်ရည်ထိထိန်းချုပ်သောဟော်မုန်းအချက်များနှင့်အာရုံကြော circuitry, ကြွက်မျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးဆင်တူသည်။ E ကိုသုတ်ရည်ထိနဲ့ DHT ပိုအရေးကြီးပါတယ်ပေမယ့် estradiol (E) နှင့် dihydrotestosterone (DHT) နှစ်ဦးစလုံးလိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုအဘို့, မိတ်လိုက်၏ activation မှကူညီသည်။ အဆိုပါ medial amygdala (MEA) တွင် implants လည်းသင်းအတွက် mounting လှုံ့ဆော်နိုင်ပါတယ်သော်လည်း medial preoptic ဧရိယာ (MPOA) ၏ဟော်မုန်း activation, အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ genitosensory input ကိုလည်းအထောက်အကူပြုပေမယ့်အဓိကနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း olfactory စနစ်များထဲကနေ Chemosensory သွင်းအားစု, အထူးသဖြင့်ကြွက်များတွင်ကြွက်များတွင်မိတ်လိုက်ဘို့အရေးကြီးဆုံးလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ကြသည်။ Dopamine agonists လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့နှင့်အချို့သော 5-HT အဲဒီ receptor Subtype စိုက်ထူသို့မဟုတ်သုတ်ရည်လွှတ်လွယ်ကူချောမွေ့သော်လည်း serotonin (5-HT), ယေဘုယျအားဖြင့် inhibitory ဖြစ်ပါတယ်။ Norepinephrine agonists နှင့် opiates အနိမ့်ဆေးများလွယ်ကူချောမွေ့နှင့်မြင့်မားသောဆေးများအပြုအမူဟန့်တားသဖြင့်, ထိုး-မှီခိုသက်ရောက်မှုရှိသည်။
keywords: သည်အထိ, ကြွက်, ကြွက်, guinea ဝက်, estradiol, dihydrotestosterone, testosterone ဟော်မုန်း, medial preoptic ဧရိယာ, medial amygdala, လိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှု
မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အာရုံကြောနှင့်ဟော်မုန်းစည်းမျဉ်းမျိုးစိတ်အနှံ့ကျယ်ပြန့်ခြားနားသည်။ သို့သျောလညျးအများကြီးသုတေသနအတော်လေးအနည်းငယ်တိရိစ္ဆာန်များအာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အထီးကြွက်နှင့်၎င်းတို့၏အာရုံကြော, ဟော်မုန်းများနှင့်အတွေ့အကြုံစည်းမျဉ်း၏အပြုအမူကိုဖော်ပြရန်။ ကျွန်တော်တို့သည်ကြွက်များနှင့်အတူဓာတ်ခွဲခန်းသုတေသနအသုံးအများဆုံးဘာသာရပ်များစတင်။ ကျနော်တို့ထို့နောက်မျိုးစိတ်အကြားတူညီနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုသတိပြု, အထီးကြွက်, ကြွက်နှင့် guinea ဝက်၏အပြုအမူကိုဖော်ပြရန်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအလွန်အမင်းအပြန်အလှန်ဖြစ်၏ ဒီနေရာမှာကျနော်တို့ကအမျိုးသမီး၏ပံ့ပိုးမှုများကိုအညီအမျှအရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းစိတ်တွင်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း, ယောက်ျားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ သောကြောင့်ကြွက်အပေါ်သုတေသနပြု၏ကျယ်ပြန့်သောငွေပမာဏ, ဤစာမူများအတွက်စာမျက်နှာကန့်သတ်ခြင်း, ငါတို့ကသာသေးငယ်တဲ့အဘို့ကိုကိုးကားနိုင်ပါတယ်။ အပိုဆောင်းအသေးစိတ်အတွက် Hull et al တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ (2006) သို့မဟုတ် Hull et al ။ (2002) ။
အထီးကြွက် copulatory အပြုအမူတွေနဲ့ဟောင်း copula တုံ့ပြန်မှုများ၏ဖော်ပြချက်။
အထီးကြွက်များသောအားဖြင့်အမျိုးသမီး၏မျက်နှာနှင့် anogenital ဒေသစုံစမ်းစစ်ဆေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံစတင်ဖို့။ နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက် 50 kHz ultrasonic အသံနှိုးဆွသောနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ထုတ်လွှတ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ ယောက်ျားအမျိုးသမီးရဲ့နောက်ဘက်, တောင်ပေါ်ကနေချဉ်းကပ်, သူ၏ထွင်ထားတဲနှင့်အတူအများအပြားလျင်မြန်စွာရေတိမ်ပိုင်းတွန်း (19-23 Hz) ပေးသည်; သူကအမျိုးသမီးရဲ့လိင်အင်္ဂါကို detect မိလျှင်, သူ 200-300 msec (Beyer et al ။ , 1981) အတွက်သူမ၏လိင်အင်္ဂါသို့မိမိအလိင်တံထည့်, တစ်ဦးပိုမိုနက်ရှိုင်းတွန်းကန်အားကိုပေးသည်။ ထို့နောက်သူသည်နောက်သို့ဆုတ်လျှင်မြန်စွာပေါက်နှင့်သူ၏လိင်အင်္ဂါ grooms ။7ဆိတ်ကွယ်ရာမိနစ် 10 ရန်, 1 intromissions2မှပြီးနောက်သူ ejaculate ပါလိမ့်မယ်။ သုတ်ရည်လွှတ်ရှည်, ပိုမိုနက်ရှိုင်းတွန်းကန်အား (750-2000 msec) ကသွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့်အများကြီးနှေးကွေးကို dismount လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် (Beyer et al ။ , 1981) ။ ဒါဟာလိင်တံ၏ခြေရင်းနားမှာနှင့်စအို sphincter နှင့်အရိုးကြွက်သားများ bulbospongiosus နှင့် ischiocavernosus ကြွက်သားစည်းချက်ကျုံ့ခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်ကို (Holmes et al ။ , 1991) ။6မိတ်လိုက်ကိစ္စတွေပြန်မရောက်မီမိနစ် 10 ရန်အဘို့အကြာရှည်စေခြင်းငှါအရာ, သုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက်သူ့ကိုယ်သူ grooms ထို့နောက် postejaculatory ကြားကာလ (pei) စဉ်အတွင်းကျိန်းဝပ်။ ပထမဦးဆုံး 50 စဉ်အတွင်း - ထို pei ၏ 75%, ယောက်ျားနောက်တဖန် copulate နှင့် 22 kHz ultrasonic အသံထုတ်လွှတ်ပေးပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ဝတ္ထုအမျိုးသမီးတစ်ခုသို့မဟုတ်အနည်းငယ်နာကျင်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူတင်ပြလျှင်အဆုံးစွန်သော 25% စဉ်အတွင်းသူဟာသုတ်ရည်ထိပြန်လည်စတင်လိမ့်မည်။ 7-8 သုက်ပြီးနောက်ယောက်ျားမွတ်မပြေနိုင်သောရောက်ရှိရန်နှင့်များသောအားဖြင့် 1 ရက်3ပြန် copulate လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ယခင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံက သာ. ကြီးမြတ် copulatory "ထိရောက်မှု" နှင့်အမျိုးမျိုးသောတွေ့ရှိရပါသည်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများတိုးမြှင်ခုခံ, သင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုပေးအပ် (et al Hull အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်။ , 2006) ။
Copulatory စွမ်းရည် (Meisel နှင့် Sachs, 45 အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်) အသက် 75 နှင့် 1994 ရက်ပေါင်းအကြားဝယ်ယူနေသည်။ Prepubertal သင်းမိတ်လိုက်အပြုအမူစတင်ခြင်းတားဆီးများနှင့် exogenous testosterone ဟော်မုန်း (T) ကိုသို့မဟုတ် estradiol (E2) ၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလျင်အမြန်။ အထီးကြွက် exogenous T ကပြန်လည်ထည့်သွင်းမထား ejaculate နိုင်စွမ်း, ဆုံးရှုံးအိုမင်း (ကုန်သည်များ et al ။ , 1991) ။ တစ်ဦးက estrogen receptor အတွက်ကျဆင်းမှု (ER) (Roselli et al ။ , 1993), မဟုတ်အန်ဒရိုဂျင် receptor များ (AR) (ကုန်သည်များ et al ။ , 1991), အဟောင်းယောက်ျားအတွက်လိုငွေပြမှုအခြေခံလိမ့်မည်။
ထွ copula တုံ့ပြန်မှုအများအပြားအခင်းအကျင်းအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သဘောဆောင်သောသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်စိုက်ထူအိမ်လှောင်အိမ်သို့မဟုတ်ကြားနေနယ်ပယ်တွင်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ တစ်ဦး estrous အမျိုးသမီးထံမှမတည်ငြိမ်သောအနံ့လူသားတွေအတွက် psychogenic စိုက်ထူများအတွက်မော်ဒယ်ဖြစ်ရသော noncontact စိုက်ထူ, ထုတ်ယူ။ ကြွက်များတွင် "Touch-based" စိုက်ထူသည်သူ၏နောက်ကျောအပေါ်အထီးသိမ်းထားသောနှင့် penile အိမ်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းအားဖြင့်ရူးနှမ်းနိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားစိုက်ထူသည့် glans လိင်တံ၏ tumescence ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Corpus Spongiosum အများ၏ engorgement ကနေရလဒ် (Hull et al အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်, 2006; ။ Meisel နှင့် Sachs, 1994) ။ Anteroflexions လည်းပေါ်ပေါက်; အဆိုပါ Corpus cavernosum ၏ ischiocavernosus ကြွက်သားနှင့်အစိုက်ထူ၏ကျုံ့ဤရလဒ်, လိင်တံက၎င်း၏ပုံမှန် posteroflexed အနေအထားမှထမွောကျစေ။ ရံဖန်ရံခါ, ဟောပြောမှုတွေထုတ်လွှတ်ဤအခြေအနေတွင်ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ လိင်တံရဲ့အောက်ခြေပတ်လည်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်အိမ်မှဆက်လက်ဖိအားသည်ဤ Touch-based တုံ့ပြန်မှုတွေအတွက်လှုံ့ဆော်မှုပေးပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် urethrogenital တုံ့ပြန်မှုလူသားတွေအတွက်အော်ဂဇင်တဲ့မော်ဒယ်အဖြစ်ထုံဆေးယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်လေ့လာခဲ့ခဲ့ပြီး (McKenna et al ။ , 1991) ။ ဒါဟာလွှတ်ပေးရေးသဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် urethral distension ကရူးနှမ်းလျက်ရှိ၏ က perineal ကြွက်သား clonic ကျုံ့ပါဝင်ပါသည်။
အထီးကြွက်မိတ်လိုက်အပြုအမူများ၏ activation အတွက်ဟော်မုန်းအချက်များ။
လုံးဝနီးပါးအားလုံးကျောရိုးရှိသတ္တဝါမျိုးစိတ်အတွက်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဝှေးစေ့၏ Leydig ဆဲလ်များကလျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက်နဲ့ E2 (မွှေးကြိုင်ခြင်းဖြင့်) သို့မဟုတ် dihydrotestosterone (5α-လျှော့ချခြင်းဖြင့် DHT) ဖြစ်စေဖို့ပစ်မှတ်ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက်, T-အပေါ်မှီခိုသည်။ plasma T ကသင်း၏ 24 နာရီ (Krey နှင့် McGinnis 1990) အတွင်းသိရှိနိုင်ဖြစ်၏ သို့သော် copulatory နိုင်စွမ်းရက်ပေါင်းသို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်ကျော်ကတဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းစေပါသည်။ T ရဲ့ 10 ရက်ပေါင်းငါးများသောအားဖြင့်အဖော်ရှာပြန်လည်ရန်လိုအပ်သည် (McGinnis et al ။ , 1989) ။ သို့သော် E2 chemo-စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် 35 မိ (လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့် Roselli 1999) အတွင်းသင်းတို့က mounting တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, လျင်မြန်သော, ဖြစ်ကောင်းမြှေးပါး-based, ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ရေရှည် Genomics သက်ရောက်မှုမိတ်လိုက်အပြည့်အဝပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းများအတွက်လိုအပ်သည်။
(Hull et al အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်။ , 2) က "မွှေးကြိုင်ယူဆချက်" ကအဆိုပြုထားအဖြစ်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုသက်ဝင်စေဖို့အဓိကဟော်မုန်း, E2006 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးတည်းအုပ်ချုပ်သည့်အခါ nonaromatizable ဖြစ်ပါသည်နဲ့ T ပေထက် ARS အဘို့ သာ. ကွီးမွတျဆှဖှေဲ့သည့် DHT, ထိရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ (;, Putnam et al2။ McGinnis နှင့် Dreifuss, 1989) သို့မဟုတ်မိတ်ဖက် preference ကို (Vagell နှင့် McGinnis, 2003) သို့သော် E1997 အပြည့်အဝအထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိန်းသိမ်းရန်မထားဘူး။ ထို့ကြောင့်အန်ဒရိုဂျင်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အထောက်အကူပြုကိုလည်းလိုအပ်သောနှင့်ဟောင်း copula လိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လုံလောက်သောများမှာ (ကှတျချ et al, 2003; ။ ။ Manzo et al, 1999; Meisel et al, 1984 ။ ) ။ E2 ဟောင်း copula တုံ့ပြန်မှုထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်ထိရောက်မှုခဲ့ပေမယ့်, က copula အတွက်အင်္ဂါဇာတ် intromissions (O'Hanlon, 1981) ကိုထိန်းသိမ်းရန်ပြုလေ၏။ Sachs (1983) E ကို copula များတွင်လိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုထုတ်ယူနိုင်မယ့် "အမူအကျင့်အဆငျ့ဆငျ့" မြှင့်လုပ်ဆောင်ပေမယ့်သူတို့ကိုဟောင်း copula disinhibit မနိုင်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။
က transmitter ကိုမကြာခဏမျိုးစုံက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်များ၏ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုက်မကြာခဏဦးမသိရသည်။ ထို့ကြောင့်, စနစ်တကျမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးအသုံးဝင်သောနိုင်ပါတယ်။ စားပွဲတင် 1 တစ်ဦးထက်ပိုဦးနှောက်ဧရိယာ၌ neurotransmitter function ကိုထိခိုက်စေသည်ဟုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ကုသမှု၏အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှုအကျဉ်းချုပ်။
အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်စနစ်တကျအုပ်ချုပ်မူးယစ်ဆေးစားပွဲတင် 1- အကျိုးသက်ရောက်မှု။
အဓိကနှင့် vomeronasal စနစ်များထဲကနေ Chemosensory input ကိုဖြစ်ကောင်းအထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အရေးအပါဆုံးစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုဖြစ်ပါတယ်။ လိင်ရင်တော့မှားမယ်အထီးချို့ယွင်းဖို့ပိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူသုတ်ရည်ထိနှင့် noncontact စိုက်ထူ၏ variable ကိုချို့ယွင်းထုတ်လုပ်နှစ်ဦးစလုံး၏အဓိကနှင့် vomeronasal လမ်းကြောင်းဖယ်ရှားပေးထားတဲ့နှစ်နိုင်ငံ olfactory bulbectomy, (Hull အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ် et al ။ , 2006) ။ အဓိကနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း olfactory စနစ်တွေထဲကနေအချက်အလက်များကို medial amygdala (MEA) တွင်လုပ်ငန်းများ၌သည်အဆိုပါလိင်အင်္ဂါအနေဖြင့် somatosensory input ကိုအတူလည်းအများအပြားမျိုးစိတ်တစ်ခုသုတ်ရည်လွှတ်ဆားကစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် subparafascicular နျူကလိယ (SPFp) ၏ parvocellular သောအဘို့ကိုမှတဆင့်လက်ဆင့်ကမ်း (Hull et al အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်။ , 2006) ။ အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာ (MPOA) ဖို့ MEA ဆီက input, နှစ်ဦးစလုံးတိုက်ရိုက်နှင့် stria terminalis (BNST) ၏အိပ်ရာနျူကလိယကနေတဆင့်, အထီးကြွက် (Kondo နှင့် Arai, 1995) တွင်သုတ်ရည်ထိဘို့အရေးကြီးသည်။
အဆိုပါ MPOA ပွဲတစ်ပွဲအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ orchestrating များအတွက်အများဆုံးဝေဖန် site ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံးအာရုံခံစနစ်များကနေသွယ်ဝိုက်အာရုံခံ input ကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်အားဖြင့်က (Simerly နှင့် Swanson, 1986) အားလက်ခံတွေ့ဆုံသော input ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ MPOA ဖွင့်ပြန်သောသူတို့အားသတင်းရပ်ကွက်မှအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပေးပို့သည်။ ဒါဟာအစကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့် somatomotor ပုံစံများနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များ (Simerly နှင့် Swanson, 1988) ထိန်းညှိကြောင်း hypothalamic, midbrain နှင့်ဦးနှောက်ကို stem အရေးပါဖို့ output ကိုပေးပို့သည်။ အတော်များများကလေ့လာမှုများ (Hull et al အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်။ , 2006) ကို MPOA ၏တွေ့ရှိရပါသည်အောက်ပါသုတ်ရည်ထိပြင်းထန်ခြင်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်တံ့ချို့ယွင်းအစီရင်ခံခဲ့ကြသည်။ သို့သော် MPOA ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူအထီးကြွက်အမျိုးသမီး (Everitt, 1997) မှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူတွဲခဲ့လင်းစရာဘို့ noncontact စိုက်ထူ (လျူ et al ။ , 1990) နှင့်ဘား-စာနယ်ဇင်းပြသခဲ့ပါသည်။ Everitt (1990) ကို MPOA လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသာသုတ်ရည်ထိဘို့အရေးကြီးသည်မဟုတ်, ကြောင်းအကြံပြုသည်။ (; 1986, သိပ်မရှိပါဘူး et al ။ Edwards ကနှင့် Einhorn, 1998) နှင့်အမျိုးသမီး (သိပ်မရှိပါဘူး et al, 1993 ။ ) ၏လိုက်စားသို့သော် MPOA ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အမျိုးသမီးမိတ်ဖက်များအတွက် preference ကိုအပါအဝင်အခြားအခင်းအကျင်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုချို့ယွင်း။
ပြောင်းပြန်ဟာ MPOA ၏ဆွသုတ်ရည်ထိ facilitated, ဒါပေမယ့် (Rodriguez-Manzo et al ။ , 2000) sated ယောက်ျားအတွက်မိတ်လိုက်ထုတ်ယူမပေးခဲ့ပါဘူး။ stimulation လည်း (။ Giuliano et al 1996) ထုံဆေးယောက်ျားအတွက် intracavernosal ဖိအားတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် urethral ဆွ (Marson နှင့် McKenna, 1994) မပါဘဲ urethrogenital တုံ့ပြန်မှုရူးနှမ်း။ အဆိုပါ MPOA စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဟောပြောမှုတွေထုတ်လွှတ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အောက်ပိုင်းကျောရိုး, တိုက်ရိုက်ပရောဂျက်ပါဘူး; အရှင်သောကြောင့်အလှည့်အတွက်ထိုတုံ့ပြန်မှုထုတ်ယူကြောင်း, အခြားဒေသများကိုသက်ဝင်ရပါမည်။
အဆိုပါ MPOA castrated ကြွက်များတွင်မိတ်လိုက်၏ဟော်မုန်းဆွများအတွက်အထိရောက်ဆုံး site ကိုမူကား, သို့သော် MPOA အတွက် T-သို့မဟုတ် E2 implants အပြည့်အဝသုတ်ရည်ထိ restore မဟုတ်ခဲ့သလဲ, DHT implants (Hull et al အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်။ , 2006) ထိရောက်မှုရှိကြ၏။ ထို့ကြောင့် MPOA အတွက် ER နဲ့ AR နှစ်ဦးစလုံးအထီးကြွက်၏ copulatory နိုင်စွမ်းကိုအထောက်အကူပြု; သို့သော်ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှုတခြားနေရာအပြုအမူအပြည့်အဝကို Activation ဘို့လိုအပ်သည်။
MPOA microinjections သည် dopamine (DA) ၏ agonist apomorphine အားဖြင့်နဂိုအတိုင်းနဂိုအတိုင်းရှိနေသည့်ကြွက်များနှင့်ထိတွေ့မှုကိုအခြေခံသည့်တုံ့ပြန်မှုများတိုးပွားလာစေခဲ့သည် (Dominguez & Hull, 2005 တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ Hull et al, 2006) ။ MPOA apomorphine သည်လည်းကြီးမားသော amygdala ကိုတွေ့ရှိရပါသည် (Dominguez et al ။ , 2001) နှင့်အတူယောက်ျားအတွက် copulation ကိုပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် DA ရန်သူသည်ကော်ပိုရိတ်နှင့်ထိတွေ့မှုအခြေခံသည့်တုံ့ပြန်မှုများကိုဟန့်တားပေးပြီး motoric function ကိုမထိခိုက်စေဘဲလိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုကိုလျော့နည်းစေသည် (Dominguez နှင့် Hull, 2005 တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်; Hull et al, 2006) ။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုခန္ဓာဗေဒနှင့်အပြုအမူတိကျတဲ့ခဲ့ကြသည်။
DA (Hull et al, 1995 ။ Sato et al, 1995 ။ ) သုတ်ရည်ထိမီနှင့်စဉ်အတွင်း MPOA အတွက်ဖြန့်ချိသည်။ တနည်းကား, အမူအကျင့်များနှင့်ခန္ဓာဗေဒနှစ်ဦးစလုံးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိ၏။ မကြာမီက, ဒါပေမယ့်တစ်ပြိုင်တည်းပါ, မ T ကအဆိုပါ DA တိုးနှင့်သုတ်ရည်ထိများအတွက်လိုအပ်သောခဲ့ (Hull et al ။ , 1995) ။ MPOA DA လွှတ်ပေးရန်မြှင့်တင်တစ်ဦးကအဓိကအချက်တစ်ချက် Basal နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို-နှိုးဆွသောအခြေအနေများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် (NO) ဖြစ်ပါသည် (Dominguez နှင့် Hull အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်, 2005; Hull et al, 2006 ။ ) ။ NO synthase immunoreactivity (NOS-ir) အပြုသဘော T နှင့် E2 နှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် (ဒူနှင့် Hull, 1999; ။ Putnam et al, 2005) ။ အဆိုပါ MPOA အတွက် NOS inhibitor (L-NAME ၏) ရင်တော့မှားမယ်အထီး, အတွေ့အကြုံရှိအမျိုးသားများအတွက်ချို့ယွင်းမိတ်လိုက်များတွင်သုတ်ရည်ထိပိတ်ဆို့နှင့်တစ်ဦး estrous မှ7Pre-ထိတွေ့မှုအားဖြင့်ဆား-ကုသယောက်ျားအတွက်ထုတ်လုပ်ပံ့ပိုးကူညီတားဆီးအဖြစ် NO လည်း copulatory စွမ်းဆောင်မှုများအတွက်အရေးကြီးပါသည် အမျိုးသမီး (Lagoda et al ။ , 2004) ။ အဆိုပါ MEA ဆီက input အမျိုးသမီးဖို့ DA တုံ့ပြန်မှုအဘို့ဖြစ်သည်မဟုတ် Basal DA အဆင့်ဆင့် (Dominguez et al ။ , 2001) အတွက်လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ MEA ၏ဓာတုဆွအမျိုးသမီး (Dominguez နှင့် Hull, 2001) ကနေထုတ်လုပ်သူတို့အားနှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ MPOA အတွက် extracellular DA အတွက်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အထီးကြွက်များ၏ amygdala မ DA-်အာရုံခံရှိပါတယ်; သို့သော်အချို့တို့သည် MPOA ဖို့ MEA ထံမှ efferents နှင့်ပင်ပို BNST ကနေ glutamatergic (Dominguez et al ။ , 2003) ဖြစ်သည်ထင်ရှား။ , အဆိုပါ MPOA တိုးလာ DA လွှတ်ပေးရန်, တစ်ဦး NOS inhibitor (Dominguez et al ။ , 2004) ကပိတျဆို့ထားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုသို့အချိုမှု၏-Dialysis reverse ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, extracellular အချိုမှုသုတ်ရည်ထိကာလအတွင်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်စဉ်အတွင်းစုဆောင်းနှစ်ခုမိနစ်နမူနာအတွက် Basal အဆင့်ဆင့်၏ 300% အထိမြင့်တက်; အချိုမှု reuptake inhibitors ၏ပြောင်းပြန် Dialysis (Dominguez et al ။ , 2006) သုတ်ရည်ထိအတော်ကြာအစီအမံ facilitated ။ အလားတူပဲ, MPOA သို့ microinjected အချိုမှုထုံဆေးကြွက်များတွင် intracavernous ဖိအား (Giuliano et al ။ , 1996) နှင့် urethrogenital တုံ့ပြန်မှု (Marson နှင့် McKenna, 1994) တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ထိုကွောငျ့, တစ်တသမတ်တည်းရုပ်ပုံလွှာကိုအနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက် MEA နှင့် BNST ထံမှပေးသောအချိုမှုအတွက်ပေါ်ထွက်လာလည်းသုတ်ရည်ထိ၏စတင်များနှင့်တိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်အရာ, နှစ်ဦးစလုံးတိုက်ရိုက်နှင့် DA အတွက် NO-mediated တိုးမှတဆင့်, သုတ်ရည်ထိနဲ့လိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ ဂါဘမြို့သားများနှင့် 2-HT inhibitory ဖြစ်နိုင်သည်သော်လည်းအထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါ၎င်း MPOA အခြား neurotransmitters, norepinephrine, acetylcholine, E5 တစ်ပြိုင်တည်းနှင့် hypocretin / orexin (hcrt / orx) ဖြစ်ကြသည်။ opioids ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်လွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါ, မြင့်မားသောဆေးများသုတ်ရည်ထိ (Hull et al အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်။ , 2006) တားစီး။
Electrophysiological အသံသွင်းကွဲပြားခြားနားသော MPOA အာရုံခံ (Shimura et al ။ , 1994) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့် copulatory စွမ်းဆောင်ရည်အထောက်အကူပြုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ MPOA အတွက် Fos-ir မိတ်လိုက်တိုး (Hull အတွက် et al ပြန်လည်သုံးသပ်။ , 2006), လိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျားအတွက် သာ. ကြီးတိုးနှင့်အတူရင်တော့မှားမယ်သူတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း, အတွေ့အကြုံရှိယောက်ျားသုတ်ရည်လွှတ် (Lumley နှင့် Hull, 1999) ရှေ့အနည်းပါးလာ intromissions ခဲ့သော်လည်း။ ထို့ကြောင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကလိင်ကသက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့မြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်။
နျူကလီးယပ် accumbens (NAc) နှင့် prefrontal cortex ဖို့ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) မှကွှအဆိုပါ mesocorticolimbic DA ကျေးရွာအုပ်စု, အားဖြည့်ခြင်းနှင့်အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူများအတွက်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါဟာ MPOA (Simerly နှင့် Swanson, 1988) နှင့်မြောက်မြားစွာကတခြားသတင်းရင်းမြစ်ဆီက input ကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။ VTA သို့မဟုတ် NAc ကိုတွေ့ရှိရပါသည် (Hull et al အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်။ , 2006) PEIs တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် noncontact စိုက်ထူလျော့နည်းသွားပေမယ့်သုတ်ရည်ထိမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ ပြောင်းပြန်ဟာ VTA ၏လျှပ်စစ်ဆွသုတ်ရည်ထိ (Markowski နှင့် Hull, 1995) facilitated ။ (Hull et al အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်။ , 2006) ကို VTA သို့မဟုတ် NAc အဓိကအားထိခိုက်နစ်နာယေဘုယျ activation ထက်အထူးသလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှမူးယစ်ဆေးဝါး Applications ကို။ မိတ်လိုက်သည့် NAc နှင့် VTA အတွက် Fos-ir activated နှင့်တစ်ဦး estrous အမျိုးသမီး-နှိုးဆွတိုးကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ (လိုပက်ဇ်နှင့် Ettenberg, 2002a) ကတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ သုတ်ရည်ထိနှင့် / သို့မဟုတ်တစ်ဦး estrous အမျိုးသမီး၏အနံ့မှထိတွေ့မှု (။ Hull et al အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ် 2006) ကို NAc အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ anterior နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic ဧရိယာ (LHA) သို့ 5-HT ၏ပြောင်းပြန် Dialysis အဆိုပါ NAc အတွက် Basal DA လျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်မဟုတ်ရင်အမျိုးသမီး၏နိဒါန်းနှင့်အတူဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောမြင့်တက်တားဆီး (Lorraine et al ။ , 1999) ။ 5-HT သုတ်ရည်လွှတ်၏အချိန်မှာ LHA အတွက်တိုးလာ (Lorraine et al ။ , 1997) ကြောင့်, NAc DA အတွက်ရရှိလာတဲ့ကျဆင်းခြင်းဟာ pei အထောက်အကူပြုပေမည်။
အဆိုပါ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ (PVN) ကို posterior pituitary ကနေလှည့်ပတ်သို့ oxytocin နှင့် vasopressin ဖြန့်ချိသော magnocellular ဌာနခွဲ, တော်တော်များများနှင့်ဦးနှောက်ဧရိယာများနှင့်ကျောရိုးဖို့မှန်းချက်ရဲ့သော parvocellular ဌာနခွဲ, ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ parvocellular တစျပိုငျးကို၏ Excitotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည် noncontact စိုက်ထူလျော့နည်းသွားပေမယ့် (လျူ et al ။ , 1997) သုတ်ရည်ထိအယှက်မပေးခဲ့ပါဘူး။ အလားတူတွေ့ရှိရပါသည် ejaculated သုတ်ရည်ပမာဏနှင့်ကျောရိုးထဲမှာ oxytocin ပါဝင်သောအမျှင်များ၏အရေအတွက်သည်လျော့ကျပေမယ့်နောက်တဖန် (Ackerman et al ။ , 1997) သုတ်ရည်ထိမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ နှစ်ဦးစလုံးကွဲပြားခြင်းသုတ်ရည်ထိအဖြစ် Touch-based နှင့် noncontact စိုက်ထူ (လျူ et al ။ , 1997) အယှက်ပြု၏ဝိုငျးကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ Argiolas နှင့် Melis ရသော DA, oxytocin နှင့်အချိုမှုတစ်ခုကြော့ရုပ်ပုံပေးအပ်ခဲ့ကြ (Melis et al ။ , 2004) ထို့နောက် hippocampus အတွက် oxytocin ကိုလွှတ်ထားတဲ့, အ PVN အတွက် oxytocinergic ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ NO ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့် (အယ်လ် Melis et ။ , 1992) , ကျောရိုး (Ackerman et al ။ , 1997), နှင့်အခြားနေရာများတွင်, အားဖြင့်စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဟောပြောမှုတွေထုတ်လွှတ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သည် (Argiolas နှင့် Melis, 2004 အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်) သုတ်ရည်ထိတိုးမြှင့်။ ဂါဘမြို့သားများနှင့် opioids ကဤလုပ်ငန်းစဉ်များတားစီး။ ဤသည်ဓာတ်ခွဲခန်းလည်း DA (Melis et al ။ , 2003), အချိုမှု, (Melis et al ။ , 2004), နှင့် NO (Melis et al ။ , 1998) သုတ်ရည်ထိစဉ်အတွင်း PVN အတွက်ဖြန့်ချိလျက်ရှိသောပြသခဲ့သည်။
အများအပြားကအပိုဆောင်းဦးနှောက်ဒေသများအထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုး။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း 5-HT, သုတ်ရည်လွှတ်၏အချိန်မှာ LHA အတွက်ဖြန့်ချိသည်နှင့် LHA သို့တစ်ဦး SSRI ၏ microinjection သုတ်ရည်ထိ inhibited (Lorraine et al ။ , 1997) ။ ထို့ကြောင့်ဤ SSRI စိတ်မကျဆေး Antidepressants လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုတားစီးဖို့ပြုမူရာမှာတဦးတည်းရဲ့ site ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, hypocretin / orexin (hcrt / orx) အာရုံခံအဆိုပါ LHA နေထိုင်နှင့် activated နေကြသည် (Fos-ir) သုတ်ရည်ထိအောက်ပါနှင့် hcrt / orx အာရုံခံများ၏နံပါတ်များကို (Muschamp et al ။ , submitted) သင်းပြီးနောက်လျော့နည်းသွားသည်။ ထို့အပွငျ 5-HT အဆိုပါ LHA (Li က et al ။ , 2002) တွင် hcrt / orx အာရုံခံဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, LHA 5-HT လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ထားတဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်သောလမ်းပစ်ခတ် VTA DA ဆဲလ်အပေါ်၎င်းတို့၏သင်တန်းနည်းပြအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖယ်ရှားလို hcrt / orx အာရုံခံ, (Muschamp et al ။ , submitted) ဟန့်တားသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ medulla ၏နျူကလိယ paragigantocellularis (nPGi) အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏တားစီး၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုတွေ့ရှိရပါသည်သုတ်ရည်ထိ facilitated နှင့်လိင်မွတ်မပြေနိုင်သော (ကြီးတွေ et al ။ , 1992) နှောင့်နှေး။ (; 2002, Marson et al ။ ။ Holmes et al, 1992) နှင့် urethrogenital တုံ့ပြန်မှုကျောရိုး transection (Marson နှင့် McKenna, 1990) မပါဘဲရူးနှမ်းခံရဖို့ခွင့်ပြုခဲ့အလားတူတွေ့ရှိရပါသည် Touch-based တုံ့ပြန်မှု facilitated ။ အဆိုပါ lumbosacral ကျောရိုးဖို့ nPGi ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ယင်း axon အများစုဟာ 5-HT (Marson နှင့် McKenna, 1992) ဆံ့။ တစ်ဦးက 5-HT neurotoxin အဆိုပါ urethrogenital တုံ့ပြန်မှု၏အဆင်းတားစီးလျော့နည်းသွား, နှင့်ကျောရိုးမှ 5-HT ၏လျှောက်လွှာကျောရိုး-transected ကြွက် (Marson နှင့် McKenna, 1994) အတွက်တုံ့ပြန်မှုနှိမ်နင်း။ ထို့ကြောင့် nPGi ထံမှ 5-HT လိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှု၏အဓိက inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ lumbar ကျောရိုးတစ်သုတ်ရည်လွှတ်မီးစက် galanin- နှင့် cholecystokinin (CCK) သာ ejaculating ပြီးနောက် Fos-ir ပြသပေးသောအာရုံခံ, -containing ပါဝင်သည် (Truitt နှင့် Coolen, 2002; Truitt et al, 2003 ။ ) ။ ဤအအာရုံခံ၏တွေ့ရှိရပါသည်ပြင်းထန်စွာသုတ်ရည်လွှတ်ချို့ယွင်း; ထို့ကြောင့်သူတို့ဦးနှောက်မှသုတ်ရည်လွှတ်-တိကျတဲ့အာရုံခံ input ကိုသယ်ဆောင်, ဒါပေမယ့်လည်းသုတ်ရည်လွှတ် (Truitt နှင့် Coolen, 2003) ထုတ်ယူမသာ။
အထီး mouse ကို copulatory အပြုအမူနှင့် penile တုံ့ပြန်မှုများ၏ဖော်ပြချက်။
မောက်အကြီးအကျယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Transgene, နောက်ကောက်နှင့် knockdowns generate မှကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကို၏အမူအကျင့်လေ့လာမှုများ, (ဘန်း-Cusato et al ကြည့်ပါ။ , 2004 တစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့) အတွက်လူကြိုက်များဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါအထီး mouse ကိုမကြာခဏရုတ်သိမ်းရေးသို့မဟုတ်သူ၏နှာခေါင်းနှင့်အတူသူမ၏တွန်းအားပေး, အမျိုးသမီးရဲ့ anogenital ဒေသအားစုံစမ်းစစ်ဆေးနေဖြင့်တစ်ဦးတှေ့ဆုံစတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအထီးထို့နောက်အမျိုးသမီးရဲ့နံပါးဆန့်ကျင်သည်သူ၏ forepaws ကိုတိုက်တွန်းနှင့်လျင်မြန်စွာ, ရေတိမ်ပိုင်းတင်ပါးဆုံတွင်းတွန်းစေသည်။ မိမိအလိင်တံအမျိုးသမီးရဲ့လိင်အင်္ဂါထဲသို့ဝင်သောအခါသူ၏ထပ်ခါတလဲလဲထိုးနှေးကွေးခြင်းနှင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းဖြစ်လာသည်။ မြောက်မြားစွာ intromissions ပြီးနောက်သူ dismounting သို့မဟုတ်အမျိုးသမီး၏ချွတ်ကျသွားမတိုင်မီ 25 စက္ကန့်အေးခဲစေခြင်းငှါအရာစဉ်အတွင်းအထီးသုက်။ mouse ကိုမိတ်လိုက်အများအပြား strain ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သုတ်ရည်လွှတ် latency 594 ထံမှ 6943 စက္ကန့်အရွယ်ရှိနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ရှေ့ intromissions များ၏နံပါတ်များကို5ထံမှ 142 မရသေးသည်လည်းရှိသည်။ တစ်ဝတ္ထုအမျိုးသမီး၏နိဒါန်းသစ်ကိုအမျိုးသမီး (Mosig နှင့် Dewsbury, 17) နဲ့ပထမဦးဆုံး intromission အပေါ် ejaculating တချို့ယောက်ျားနှင့်တကွ, pei လျော့နည်းသွားပေမယ့် PEIs, 60 ထံမှ 1976 မိနစ်မရသေးသည်လည်းရှိသည်။ အရပျ၌ preference ကိုနှစ်ဦးစလုံး intromissions နှင့်သုက်ဆုချီးခံရဖို့ပြသခဲ့ကြသည်စမ်းသပ် (Kudwa et al ။ , 2005) ။
touch-based တုံ့ပြန်မှုကိုလည်းကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ပြန်ရုပ်သိမ်းသူတို့ရဲ့ penile အိမ်မှအတူထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနေချိန်တွင်ကြွက်များနှင့်မတူဘဲနဂိုအတိုင်းအထီးကြွက်အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုမပြဘဲ, သို့သော်ဝမ်းဗိုက်ဖိအားစိုက်ထူပေမယ့်မပေး anteroflexions (Sachs, 1980) ထုတ်ယူကိုပြု၏။ အဆိုပါ bulbospongiosus ကြွက်သား intromission စဉ်နှင့်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီး (Elmore နှင့် Sachs, 1988) impregnating များအတွက်အရေးကြီးသောနေသောခွက် (အမျိုးသမီးရဲ့သားအိမ်ခေါင်းဆန့်ကျင်သုတ်ရည်ကိုင်ကြောင်းပြင်းထန်သောစိုက်ထူ) မှစိုက်ထူစေတယ်။
အထီး mouse ကိုမိတ်လိုက်အပြုအမူများ၏ activation အတွက်ဟော်မုန်းအချက်များ။
T က DHT နှင့် E2 မှ sensitivity ကိုဗီဇအကြားကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူ, castrated ကြွက်တွေမှာ precopulatory နှင့် copulatory အပြုအမူတွေကို restore ပြန်အတွက် DHT သို့မဟုတ် E2 ဖြစ်စေထက်ပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ် (ဘန်း-Cusato et al အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်။ , 2004) ။ ကသင်း (ယာကုပျနှငျ့ Nyby, 60) တွင် 2002 မိနစ်အတွင်း mounting facilitated အဖြစ် T ကလည်း, လျင်မြန်သောသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ E ကိုမှ aromatized, ဒါပေမယ့်မရ DHT မှ5α-လျှော့ချ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပြန်လည်အတွက် ပို. ပင်ထိရောက်သော T ကထက်ခဲ့ကြသည်နိုင်ဒြပ်အန်ဒရိုဂျင် (5α-androstanediols) (Ogawa et al ။ , 1996) ။ တဦးတည်း strain, အ B6D2F1 မျိုးစပ်, exogenous ဟော်မုန်း (မြို့ McGill နှင့် Manning, 1976) မပါဘဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးသုံးပတ်သင်းပြီးနောက် copulate နိုင်စွမ်းရပြန်လေ၏။ ဤ "အစဉ်မပြတ်" ယောက်ျား E2 အပေါ်မူတည်; သော်လည်း E2 ၏အရင်းအမြစ် (Sinchak et al ။ , 1996) ကဦးနှောက်ကိုထုတ်လုပ်စေခြင်းငှါ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။
အဆိုပါ MPOA လုံးဝပွနျလညျထူထောငျ ultrasonic အသံသို့ T ရဲ့ implantation, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း marking ဆီးပွနျလညျထူထောငျနှငျ့ (Sipos နှင့် Nyby, 1996) mounting သို့မဟုတ်ဆီး preference ကိုအပေါ်နည်းနည်းသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်တစ်ဦးတည်းထိရောက်မှုသော VTA, အတွက် T ရဲ့နောက်ထပ် implants preference ကို mounting နှင့်ဆီးအပေါ်များ၏ညှိနှိုင်းသက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ MPOA အတွက် E2 implants T က (Nyby et al ။ , 1992) အဖြစ်ထိရောက်သောကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။
Steroid တစ်မျိုးအဲဒီ receptor Mutant ။
အဆိုပါ testicular လောကတွင်ဆရာမများ (Tfm, ဒါမှမဟုတ်အန်ဒရိုဂျင်အာရုံမခံစားနိုင်သော) ကြွက်များတွင် mutation အဖြစ်အခြားတိရစ္ဆာန်, (ဘန်း-Cusato et al အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်။ , 2004) ကို AR မျိုးရိုးဗီဇအတွက်တစ်ခုတည်းအခြေစိုက်စခန်း၏ deletion 'ကနေရလဒ်တွေကို။ Tfm အထီး, phenotypically အမျိုးသမီးပေါ်လာမထှနျးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, exogenous ဟော်မုန်းမပါဘဲစမ်းသပ်ပြီးလျှင်အဘယ်သူမျှမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ။ အသေးစားဝှေးစေ့ T နှင့် DHT ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့် secrete ။ ဤအအထီး castrated နှင့် DHT, T, အီး, ဒါမှမဟုတ် E ကို + DHT ၏နေ့စဉ်ဆေးထိုးနဲ့ကုသမယ်ဆိုရင်သို့သော်သူတို့ရံဖန်ရံခါသုက် (Olsen, 1992) အပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ variable ကိုပမာဏပြသနိုင်ဖို့စတင်။ အဆိုပါERα (ERαKO) ချို့တဲ့ကြွက် T နဲ့ castrated နှင့်အစားထိုးပင်အခါ, နည်းနည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုပြသ (။ Rissman et al, 1999; Wersinger နှင့် Rissman, 2000a) ။ ERαKOအထီးကြောင့်လျော့နည်းသွား ER-mediated အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက် (Wersinger et al ။ , 1997) အား, ရိုင်း-type အမျိုးအစားကြွက်လုပ်ပေးထက်ပို T က secrete အဖြစ်ဒီဟော်မုန်းတစ်ခုမရှိခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ T ရဲ့သာမန်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူERαKOယောက်ျားနှင့်အစားထိုး၏သင်း (Wersinger et al ။ , 1997) သို့မဟုတ် DHT ၏သာမန်အဆင့်ဆင့်ထက်ပိုမိုမြင့်မား (Ogawa et al ။ , 1998) mounting တိုးလာပေမယ့်သုတ်ရည်လွှတ် restore ခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါ DA agonist apomorphine ၏စနစ်ထိုး (Wersinger နှင့် Rissman, 2000b) ပုံမှန်ERαKOယောက်ျား၏မိတ်လိုက်နှင့်မိတ်ဖက် preference ကိုပြန်၏။ သို့သော် apomorphine icv (ဘန်း-Cusato et al တှငျဖျောပွထား။ , 2004) သာတောင်ပေါ်နှင့် intromissions ပြန်၏။ ERβ (ERβKO) ချို့တဲ့ Pubertal အထီး WT အထီးကိုပြု၏, ဒါပေမယ့် (ဘုရားကျောင်း et al ။ , 2003) မဟုတ်ရင်ပုံမှန်ခဲ့ကြသည်ထက်နောက်ပိုင်းတွင် ejaculate နိုင်စွမ်းရရှိခဲ့သည်။ လာသောအခါ gonadally နဂိုအတိုင်းအဖွင်နှစ်ဦးစလုံးချို့တဲ့ယောက်ျားမှာအားလုံး (Ogawa et al ။ , 2000) copulate ခဲ့ပါဘူး။ သို့သော် apomorphine အများဆုံးတိရိစ္ဆာန်များအတွက် mounting နှင့်ဝက်အတွင်း intromitting လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ခဲ့သည်; အဘယ်သူမျှမ (ဘန်း-Cusato et al တှငျဖျောပွထား။ , 2004) ejaculated ။ အဆိုပါ AR နှင့်ERαနှစ်ဦးစလုံးချို့တဲ့မျိုးရိုးဗီဇအထီးပင် T နဲ့သင်းနဲ့အစားထိုးပြီးနောက်, copulate ဘဲ, သို့သော် E2 အစားထိုးခြင်းနှင့်စနစ်တကျ apomorphine များ၏ပေါင်းစပ် (ဘန်း-Cusato et al တှငျဖျောပွထား။ , 2004) အချို့တိရိစ္ဆာန်များအတွက် mounting လှုံ့ဆော်ခဲ့ပေ။ aromatase (Arko) ချို့တဲ့အထီး E ကို synthesize နိုင်ရင်ပေမယ့်ပုံမှန် receptors ရှိသည်။ နည်းပါးလာ Arko အထီး intromitted, တပ်ဆင်ထားနှင့် ejaculated, သူတို့သည်ပြုကြ၏တဲ့အခါမှာကြာကြာ latencies ရ၏ သို့သော်တစ်ဦးအချိန်ကြာမြင့်စွာအချိန်များအတွက်အမျိုးသမီးနှင့်အတူထားရှိသည့်အခါသူတို့နှင့် ပတ်သက်. သုံးပုံတစ်ပုံအမှိုက်သရိုက်များ sire နိုင်ခဲ့ကြတယ် (Bakker et al, 2002; ။ Matsumoto et al, 2003 ။ ) ။
အထီး mouse ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်စနစ်တကျအုပ်ချုပ်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ။
အထီးကြွက်နှင့်ကြွက်အပေါ်စနစ်တကျမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ၏အကျဉ်းချုပ်ဘို့စားပွဲတင်2ဖတ်ရှုပါ။
အထီး mouse ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အမျိုးမျိုးသောဦးနှောက်ဧရိယာများ၏အခန်းကဏ္ဍ။
Chemosensory တွေကို (Hull et al အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်။ , 2006) အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အလွန်အရေးကြီးလှသည်။ သို့သော် vomeronasal system ကိုမိတ်လိုက်တစ်ခု, အရေးကြီးပေမယ့်အရေးပါမဟုတ်အခန်းကဏ္ဍရှိနိုင်ပါသည်။ MPOA ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပြင်းထန်စွာသည်အခြားမျိုးစိတ်၌ရှိသကဲ့သို့, အထီးကြွက်တွေမှာသုတ်ရည်ထိချို့ယွင်း (Hull et al အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်။ , 2006) ။ ERαKO WT သို့မဟုတ် Tfm ကြွက်တွေထက် MPOA အတွက်လျော့နည်း nNOS-ir ရ၏ ထို့ကွောငျ့, အီး (Scordalakes et al ။ , 2002) ကြွက်များတွင် nNOS-ir တက်-ထိန်းညှိအဖြစ်ကြွက်များဖြစ်သည်။
အထီးဟမ်းစတား copulatory အပြုအမူများ၏ဖော်ပြချက်။
ကြွက်များနှင့်ကြွက်များ (Dewsbury, 1979 တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်) ၏ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများတွင်ဟမ်းစ်တာများ၏မိတ်လိုက်ခြင်းအပြုအမူသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အမျိုးသမီးဆီးရီးယားရွှေဟမ်းစ်သည်အဆက်မပြတ်အဆက်မပြတ်ဖုံးအုပ်ထားခြင်းအားဖြင့် Lordosis အနေအထားတွင်ရှိနေသည်။ မိတ်လိုက်ခြင်းသည်ကြွက်များထက်ပိုမိုလျှင်မြန်စွာတိုးတက်သည်။ အကြားအတွင်း၌အင်တာ ၀ န်ထုတ်လွှတ်မှုကြားကာလသည် ၁၀ စက္ကန့်သာရှိပြီး PEIs သည်ပထမသုက်လွှတ်ပြီးနောက် ~ ၃၅ စက္ကန့်မှကိုးနာရီအပြီး ၉၀ စက္ကန့်အထိတိုးတက်သည်။ Intromissions နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်မှုများသည်ရှည်လျားပြီး ~ 10 နှင့် 35 sec အသီးသီးရှိသည်။ ဟမ်းစ်ကြောင်များတွင်ကြွက်များထက်သန္ဓေတည်မှုပိုမိုများပြားသည်။ ၉ ကြိမ်မှ ၁၀ ကြိမ်အထိ၊ နောက်ဆက်တွဲပြ “နာများ သည်ရှည်လျားသောခန္ဓာကိုယ်တွင်းထိုးနှက်ခြင်း၊ accelerometric နှင့် polygraphic နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု၍ ဟမ်းစ်တာမိတ်လိုက်ပုံစံကိုအသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကတင်ပါးဆုံရိုးရထားများသည် ၁ စက္ကန့်ခန့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်မြင့်တက်သော်လည်းတောင်နှင့်ဆက်စပ်သောရထားများသည် intromissions နှင့် ejaculations (Arteaga & Moralí, 90) ထက်ပိုရှည်သည်။ တောင်တန်းများအတွင်းရထားများနှေးကွေးသော်လည်း pelvic ထိုးခြင်းကြိမ်နှုန်းသည်တစ်စက္ကန့်လျှင် ၁၅ ကြိမ်ထိုးသည်။ သုတ်ရည်လွှတ်စဉ်အတွင်းတွန်းကန်အားပိုမိုမြင့်မားကြိမ်နှုန်း (2.4 / sec) နှင့်လျော့နည်းသန်စွမ်း၏သော်လည်း intromissions စဉ်အတွင်းမည်သည့်တွန်းလှန်ခြင်းမရှိဘဲကာလရှိခဲ့သည်။ ရှည်လျားသော intromissions (၆ စက္ကန့်မှ ၂၅ စက္ကန့်အတွင်း) intravaginal thrusting (စက္ကန့်လျှင် ၁ မှ ၂) အထိရှိသည်။ penile သွင်း၏ကြာချိန် intromissions ထက်သုတ်ရည်လွှတ်၌ကြာကြာခဲ့ပေမယ့်ရှည်လျား intromissions ထက်တိုတောင်းခဲ့ပါတယ်။
အပျိုဖော်ဝင်စစဉ်အတွင်း T ကအစားထိုးအတူသင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လူကြီးအတွက် T ကအစားထိုးပြီးနောက်အပျိုဖော်ဝင်ချို့ယွင်းသုတ်ရည်ထိကာလအတွင်း T ကမရှိခြင်း, (Schultz et al ။ , 2004) ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ, ဤလိုငွေပြမှုများအတွက်လျော်ကြေးပေးမပေးခဲ့ပါဘူး။ တစ်ဦးကျခံအမျိုးသမီးများ၏အနံ့ (1998 ။ Romeo et al) ပင်အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းမပြုမီ MPOA အတွက် Fos-ir activated, ဒါပေမယ့်အပျိုဖော်ဝင် (Schultz et al ပြီးနောက်သည်အထိ DA metabolite DOPAC (DA လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအတိုင်းအတာ) ကိုတိုးမြှင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။ , 2003 ) ။ ထို့ကြောင့်, အပျိုဖော်ဝင်အပြီးအပိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိန်းညှိကြောင်းဒေသများရှိအာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့ပြောင်းလဲ gonadal ပေးသောဟော်မုန်းတစ်စက္ကန့်စည်းရုံးရေးကာလဖြစ်နိုင်သည် (Romeo et al, 2002; ။ Schultz et al, 2004 ။ ) ။
ကြွက်နှင့်ကြွက်များတွင်စနစ်တကျမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ၏အကျဉ်းချုပ်ဘို့စားပွဲတင်2ဖတ်ရှုပါ။
နှစ်နိုင်ငံ olfactory bulbectomy သို့မဟုတ်အဓိကနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း olfactory စနစ်များပေါင်းစပ် deafferentation အပြီးအပိုင် (Hull et al အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်။ , 2006) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖျက်သိမ်း။ အဆိုပါဆက်စပ်ပစ္စည်း olfactory စနစ်၏ Deafferentation အတွေ့အကြုံရှိယောက်ျား (Meredith, 1986) လျော့နည်းထိခိုက်နစ်နာဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ variable ကိုသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဓိကနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း olfactory မီးသီးအတွက် Fos-ir အတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်တိုးမဟုတ်ဘဲအဖော်ရှာခြင်းထက်, chemosensory လှုံ့ဆော်မှုမှတိကျတဲ့ခဲ့ကြသည် (et al Hull အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်။ , 2006) ။
T ကဒါမှမဟုတ် E, ဒါပေမယ့်မရဖြစ်စေ DHT, အ MEA သို့ implants castrated အထီးဟမ်းစတား (Wood က, 1996) တွင် copulatory အပြုအမူပြန်၏။ ထို့ကြောင့် MEA ၏ဟော်မုန်း activation အထီးဟမ်းစတားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏စကားရပ်များအတွက်လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ BNST, MPOA နှင့်အခြားဒေသများဖို့ stria terminalis နှင့် ventral amygdalofugal လမ်းကြောင်းမှတဆင့် MEA ခရီးသွားများထံမှ projections ။ နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်သုတ်ရည်ထိနှေးကွေးခြင်း, နှစ်ဦးစလုံးလမ်းကြောင်း၏ပေါင်းစပ်ဖြတ်တောက်မှုသုတ်ရည်ထိဖျက်သိမ်း (Lehman et al ။ , 1983) ကို stria terminalis ဖြတ်တောက်ခြင်း။
များစွာသောအခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့သကဲ့သို့, MPOA အထီးဟမ်းစတားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သို့သော်သင်းအတွက် Steroid တစ်မျိုး implants variable ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်နှင့်အပြည့်အဝ (Wood နဲ့ Newman က, 1995) အပြုအမူ restore လုံလောက်မရှိကြပေ။ Chemosensory တွေကိုအထီးဟမ်းစတား (Kollack-Walker ကနှင့် Newman က, 1997) ၏ MPOA အတွက် Fos activated ။ nNOS-ir အဆိုပါ MPOA အတွက် gonadal Steroid တစ်မျိုး receptors နှင့်အတူပူးတွဲဒေသသုံးအဖြစ်ပြန်ဆိုဖြစ်တယ်, သင်း nNOS-ir (Hadeishi နှင့် Wood က, 1996) ယုတ်လျော့။ ကြွက်၌ရှိသကဲ့သို့, extracellular DA အဆင့်ဆင့်အနေနဲ့ estrous အမျိုးသမီးနှင့်အတူတင်ပြအထီးဟမ်းစတားများ၏ MPOA ထ; ဒီတိုး, နှစ်နိုင်ငံသို့မဟုတ် ipsilateral, ဒါပေမယ့် contralateral သို့မဟုတ်အတုအယောင်မဟုတ် bulbectomy ပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရ (Triemstra et al ။ , 2005) ။
အထီး guinea ဝက် copulatory အပြုအမူများ၏ဖော်ပြချက်။
ယောက်ျားပီသသောဝက်များသည်ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်လည်ပင်းပေါ်တွင်အမျိုးသမီးအမွေးကိုတီးခြင်း၊ သူမ၏ anogenital ဒေသကိုရှူရှိုက်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးကိုလှည့်နေစဉ်သို့မဟုတ်သူ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းတွင်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုပြောင်းလဲခြင်းစသည့်မျိုးစိတ် - ပုံမှန်အကြိုလိင်ဆက်ဆံမှုပြုသည့်အပြုအမူများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ စာရေးကိရိယာ (Thornton et al ။ , 1991) ။ ထို့နောက်အထီးသည်အမျိုးသမီးကိုနောက်ဘက်မှချဉ်းကပ်ကာသူမ၏နှစ်ဖက်စလုံးကိုကပ်ထားစဉ်အမျိုးသမီး၏နောက်ကျောကိုရင်ဘတ်ပေါ်တွင် တင်၍ တင်ပါးဆုံတွင်းထိုးခြင်းစတင်သည်၊ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အင်္ဂါဇာတ်ထိုးခြင်းဖြစ်ပေါ်စေသည် (Valenstein et al ။ , 1954) ။ အထီးများသည်တစ်မိနစ်လျှင် ၁ နှုန်းခန့်ဖြင့်ထိုးဖောက်နိုင်ပြီး (Thornton et al ။ , 1) နှင့် ၈၀% သည် ၁၅ မိနစ်စမ်းသပ်မှုတွင် (သု။ ၁၉၈၅ Butera & Czaja) တွင်သုတ်ရည်ထုတ်ယူနိုင်သည်။ လာမည့်တစ်နာရီအတွင်းပြန်လည်စုဆောင်းခြင်းကိုအစပြုခြင်းမပြုပါကသူသည်အခြားအမျိုးသမီး (Grunt & Young, 1991) နှင့်ထပ်မံကူးစက်နိုင်သည်။
ကြွက်များနှင့်မတူဘဲစနစ်တကျအုပ်ချုပ်သော DHT သည်အစုလိုက် guinea pig (Butera & Czaja, 1985) တွင်အပြည့်အ ၀ ပြန်လည်စုစည်းနိုင်သည်။ ထို့အပြင် MPOA သို့ DHT implants များသည် castrates (Butera and Czaja, 1989) တွင်စုဆောင်းခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်လုံလောက်သည်။
ကြွက်တို့တွင် copulatory ဒြပ်စင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ပေမယ့်အဲဒီဒြပ်စင်ကိုထိန်းချုပ်သောဟော်မုန်းအချက်များနှင့်အာရုံကြော circuitry ဆင်တူသည်။ E ကိုကြွက်, ကြွက်နှင့်ကြွက်များ၏လိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုအဘို့, သုတ်ရည်ထိနဲ့ DHT ပိုအရေးကြီးပါတယ်ပေမယ့် E နှင့် DHT နှစ်ဦးစလုံး, မိတ်လိုက်၏ activation မှကူညီသည်။ အဆိုပါ MEA အတွက် implants လည်းသင်းအတွက် mounting လှုံ့ဆော်နိုင်ပါတယ်သော်လည်း MPOA ၏ဟော်မုန်း activation, အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ SPFp မှတဆင့် genitosensory input ကိုလည်းအထောက်အကူပြုပေမယ့်အဓိကနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း olfactory စနစ်များထဲကနေ Chemosensory သွင်းအားစု, အထူးသဖြင့်ကြွက်များတွင်မိတ်လိုက်ဘို့အရေးကြီးဆုံးလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုခုကိုစနစ်တကျဒါမှမဟုတ် MPOA သို့မဟုတ် PVN သို့ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာ DA agonists လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့။ 5-HT5C agonists စိုက်ထူလွယ်ကူချောမွေ့နှင့် 1-HT5A agonists (ကြွက်တွေမှာ မှလွဲ. ) သုတ်ရည်လွှတ်လွယ်ကူချောမွေ့ပေမယ့် 2-HT agonists, အထူးသဖြင့် 5-HT1B, အပြုအမူတားစီးလေ့ရှိပါတယ်။ norepinephrine agonists နှင့် opiates အနိမ့်ဆေးများလွယ်ကူချောမွေ့နှင့်မြင့်မားသောဆေးများအပြုအမူဟန့်တားသဖြင့်, ထိုး-မှီခိုသက်ရောက်မှုရှိသည်။
ဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှု EMH မှ NIMH ထောက်ပံ့ငွေ R01 MH 40826 နှင့် K02 MH 001714 ကထောက်ခံခဲ့သည်။
1.Ackerman AE, Lang GM က, Clemens LG က။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်အပြုအမူနှင့်ဟောပြောမှုတွေထုတ်လွှတ်မှုအပေါ် paraventricular ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1997; 63: 49-53 [PubMed] ။
2.Ågmoတစ်ဦးက, သိပ်မရှိပါဘူး R. Opioids နှင့်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1988; 30: 1021-1034 [PubMed] ။
3.Ågmoတစ်ဦးက, ကောက်ယူသူ Z. catecholamines နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမပါဘဲအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများစတင်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1990; 35: 327-334 [PubMed] ။
4.Ahlenius S က, အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ရွေးချယ် D1 နှင့် D2 ရန်၏ Larsson K. အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Experentia ။ 1990; 46: 1026-1028 ။
5.Ahlenius S က, 5-methoxy-N အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် N-di-methyl-tryptamine နှင့် 5-hydroxytryptophan ၏ Larsson K. အတိုက်အခံဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1991; 38: 201-205 [PubMed] ။
6.Ahlenius S က, 5-HTP ထုတ်လုပ်အထီးကြွက် ejaculatory အပြုအမူ၏တားစီးအတွက် 1-HT5B receptors တစ်ခုပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက် Larsson K. အထောက်အထား။ Psychopharmacology ။ 1998; 137: 374-382 [PubMed] ။
7.Ahlenius S က, Larsson K ကို Arvidsson LE ။ အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် stereoselective 5-HT1A agonists ၏ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1989; 33: 691-695 [PubMed] ။
8.Argiolas အေ Neuropeptides နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1999; 23: 1127-1142 [PubMed] ။
9.Argiolas တစ်ဦးက, Melis MR ။ oxytocin နှင့်အထီးနို့တိုက်သတ္တဝါများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် paraventricular နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Physiol ပြုမူနေ။ 2004; 83: 309-317 [PubMed] ။
10.Arteaga M က, အထီးဟမ်းစတားများ၏မော်တာများနှင့်လိင်အင်္ဂါ copulatory တုံ့ပြန်မှု၏Moralí G. အလက်ခဏာ။ J ကို Physiol ပဲရစ်။ 1997; 91: 311-316 [PubMed] ။
11.Arteaga M က, ရွှေဟမ်းစတား (Mesocricetus auratus) EUR Neuropsychopharmacol ၏အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပုံစံအပေါ် yohimbine နှင့် apomorphine ၏ Motte-Lara J ကို, Velazquez-Moctezuma ဂျေအကျိုးသက်ရောက်မှု။ 2002; 12: 39-45 [PubMed] ။
12.Bakker J ကို, ဟွန်ဒါ S က, Harada N ကို, Balthazart ဂျေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော် preference ကိုအထီးကြွက်တွေအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ aromatase (cyp19) မျိုးဗီဇလိုအပ်သည်။ Horm ပြုမူနေ။ 2002; 42: 158-171 [PubMed] ။
13.Benelli တစ်ဦးက, Bertolini တစ်ဦးက, Poggioli R ကို, Cavazzuti အီး, Calza L ကို, Giardino L ကို, Arletti R. Nitric oxide ကိုကြွက်၏အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ EUR J ကို Pharmacol ။ 1995; 294: 505-510 [PubMed] ။
14.Beyer ကို C, Contreras, G, Morali, G, ကြွက်များတွင်မော်တာ copulatory ပုံစံပေါ်သင်းနှင့်လိင် Steroid တစ်မျိုးကုသမှု Larsson K. အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Physiol ပြုမူနေ။ 1981; 27: 727-730 [PubMed] ။
15.Bialy M က, Beck J ကို, Abramczyk P ကို, Trzebski တစ်ဦးက, နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ပေါင်းစပ်တားစီးပြီးနောက်အထီးကြွက်များတွင် Przybylski ဂျေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1996; 60: 139-143 [PubMed] ။
16.Boscarino BT, Parfitt DB ။ clomipramine ၏နာတာရှည်ခံတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးယောက်ျားဆီးရီးယားဟမ်းစတား (Mesocricetus auratus) Physiol ပြုမူနေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလျော့နည်းစေပါသည်။ 2002; 75: 361-366 [PubMed] ။
17.Burnett AL, နယ်လ်ဆင် RJ, ကယ်လ်ဗင်, DC, လျူ JX, ဒေမ GE, Klein SL, Kriegsfeld LJ, Dawson TM, Snyder SH ။ အာရုံခံနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase ချို့တဲ့ကြွက်များတွင်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-မှီခို penile စိုက်ထူ။ Mol Med ။ 1996; 2: 288-296 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
18.Burns-Cusato M က, Scordalakes EM, Rissman EF ။ ကြွက်နှင့်ဒေတာများပျောက်ဆုံး: ကြှနျုပျတို့သိ (နှင့်သင်ယူရန်လိုအပ်) အဘယျအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2004; 83: 217-232 [PubMed] ။
19.Butera ကို PC, Czaja ဂျေအေ။ ပစ်မှတ်တစ်သျှူးများနှင့်အထီးကြွက်များနှင့် guinea ဝက်အတွက် dihydrotestosterone နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကို Maintenance ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1985; 34: 319-321 [PubMed] ။
20.Butera ကို PC, Czaja ဂျေအေ။ အထီး guinea ဝက်များ၏မျိုးပွားဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့်အမူအကျင့်ထဲမှာ dihydrotestosterone ၏ intracranial implants ၏ဆိုးကျိုးများ။ Horm ပြုမူနေ။ 1989; 23: 424-431 [PubMed] ။
21.Cantor JM, Binik YM, Pfaus JG ။ oxytocin နှင့်အတူတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်: နာတာရှည် fluoxetine ယောက်ျားကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ Psychopharmacology ။ 1999; 144: 355-362 [PubMed] ။
22.Chambers KC, Thornton je, Roselli အီး။ ဦးနှောက်ကိုစညျးအန်ဒရိုဂျင်နှင့်ဇီဝြဖစ်, testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ခေတ်-related လိုငွေပြမှု။ Neurobiol အို။ 1991; 12: 123-130 [PubMed] ။
23.Clark JT ။ လိင်စိတ်နိုးထနှင့်စွမ်းဆောင်ရည် adrenergic-neuropeptide-Steroid တစ်မျိုး interaction ကအားဖြင့် modulated နေကြသည်။ ခုနှစ်တွင်: Bancroft J ကို, အယ်ဒီတာ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာထူးအမည်နှင့်အလုပ်မဖြစ်၏ဆေးဝါးဗေဒ: အ Esteve Foundation မှစာတမ်းဖတ်ပွဲ VI ကို၏တရားစွဲဆိုထား; သားတော်သည် Vida, Mallorca ။ 9-12 အောက်တိုဘာလ 1994; အမ်စတာဒမ်: Excerpta Medica; 1995 ။ စစ။ 55-68 ။
24.Clark JT, Smith က ER ။ Clonidine အထီးကြွက်များတွင် copulatory အပြုအမူနှင့် erectile တုံ့ပြန်မှုဖိနှိပ်: naloxone pretreatment ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်း။ Neuroendocrinologv ။ 1990; 51: 357-364 ။
25.Clark JT, Smith က ER, Davidson JM ။ yohimbine အားဖြင့်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏စွမ်းရည်မြှင့်။ သိပ္ပံ။ 1984; 225: 847-849 [PubMed] ။
26.Clark JT, Smith က ER, Davidson JM ။ အထီးကြွက်များတွင်α-adrenoceptors အားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏မော်ဂျူအဘို့သက်သေသာဓက။ Neuroendocrinology ။ 1985; 41: 36-43 [PubMed] ။
27.Cooke BM, Breedlove သည် SM, ဂျော်ဒန် C. နှစ်ဦးစလုံး estrogen receptor နှင့်အန်ဒရိုဂျင် receptors အထီးကြွက်များတွင် medial amygdala နှင့်လိင်စိတ်နိုးထ၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာ testosterone ဟော်မုန်း-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများမှကူညီသည်။ Horm ပြုမူနေ။ 2003; 43: 335-346 ။
28.Cross အီး, Roselli အီး။ 17beta-estradiol လျှင်မြန်စွာ chemoinvestigation နှင့် castrated အထီးကြွက်များတွင် mounting နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ နံနက် J ကို Physiol ။ 1999; 276 (5 Pt 2): R1346-1350 [PubMed] ။
29.Dewsbury DA ။ ဟော်မုန်း-အပြုအမူ interaction ကသုတေသနအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ဖော်ပြချက်။ ခုနှစ်တွင်: Beyer ကို C, အယ်ဒီတာ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ endocrine ထိန်းချုပ်ရေး။ ကျီးစာနယ်ဇင်း; နယူးယော့: 1979 ။ စစ။ 3-32 ။
30.Dominguez JM, Balfour ME, Coolen LM ။ အဆိုပါ medial preoptic နျူကလိယထဲမှာအာရုံခံ် NMDA အဲဒီ receptor ၏သုတ်ရည်ထိ-သွေးဆောင် activation ။ Abst Soc ပြုမူနေ Neuroendocrinol Horm ပြုမူနေ။ 2003; 44: 46 ။
31.Dominguez JM, Gil M က, Hull က EM ။ Preoptic အချိုမှုအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 1699-1703 [PubMed] ။
32.Dominguez JM, Hull က EM ။ အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်ဂယက်: အ medial amygdala ၏ stimulation medial preoptic dopamine လွှတ်ပေးရန်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဦးနှောက် Res ။ 2001; 917: 225-229 [PubMed] ။
33.Dominguez JM, Hull က EM ။ Dopamine က, medial preoptic ဧရိယာနှင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2005; 86: 356-68 [PubMed] ။
34.Dominguez JM, Muschamp JW, Schmich JM, Hull က EM ။ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ဟာ medial preoptic ဧရိယာထဲမှာအချိုမှု-evoked dopamine လွှတ်ပေးရန် mediates ။ neuroscience ။ 2004; 125: 203-210 [PubMed] ။
35.Dominguez J ကို, Riolo ဖက်စပ်, Xu Z ကို Hull က EM ။ သုတ်ရည်ထိနှင့် medial preoptic dopamine လွှတ်ရာ medial amygdala တို့ကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 349-355 [PubMed] ။
36.Du J ကို, Hull က EM ။ အာရုံခံနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase နှင့် tyrosine hydroxylase အပေါ် testosterone ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1999; 836: 90-98 [PubMed] ။
37.Edwards DA, Einhorn LC ။ Preoptic နှင့်လိင်လှုံ့ဆျောမှု၏ midbrain ထိန်းချုပ်မှု။ Physiol ပြုမူနေ။ 1986; 37: 329-335 [PubMed] ။
38.Elmore LA က, Sachs bd ။ အိမ်သူအိမ်သား mouse ကိုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ကလေးမွေးဖွားအတွက် bulbospongiosus ကြွက်သားအခန်းက္ပ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1988; 44: 125-129 [PubMed] ။
39.Everitt BJ ။ လိင်လှုံ့ဆျောမှု: အထီးကြွက်များ၏အစာစားချင်စိတ်များနှင့် copulatory တုံ့ပြန်မှုအခြေခံသည့်ယန္တယား၏တစ်ဦးကအာရုံကြောနဲ့အပြုအမူဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1990; 14: 217-232 [PubMed] ။
LHRH နှင့် AcLHRH40-5 အားဖြင့်အထီးဟမ်းစတားအတွက် 10.Fernandez-Fewell GD, မိတ်လိုက်အပြုအမူ၏ Meredith အမ်နည်းပြ: အ vomeronasal စနစ်ဖြင့်အပြန်အလှန်။ Physiol ပြုမူနေ။ 1995; 57: 213-21 [PubMed] ။
41.Ferrari က F, Ottani တစ်ဦးက, အထီးကြွက်များတွင်အလယ်ပိုင်း dopamine-mediated အပြုအမူအပေါ် sildenafil ၏ Giuliani ဃသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 2002; 70: 1501-1508 [PubMed] ။
42.Frank JL, Hendrick SE, Olson CH ။ အကွိမျမြားစှာသုက်နှင့်နာတာရှည် fluoxetine: အထီးကြွက် copulatory အပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2000; 66: 337-342 [PubMed] ။
စမ်းသပ်ဆဲအထောက်အထားများနှင့်ကုထုံးအမြင်များ: အ melanocortinergic စနစ်ဖြင့် penile စိုက်ထူ၏ 43.Giuliano အက်ဖ်ထိန်းချုပ်ရေး။ J ကို Androl ။ 2004; 25: 683-694 [PubMed] ။
44.Giuliano က F, ဘာ J ကို, Alexandre L ကို, Niewoehner ဦး, Haning H ကို, Bischoff အီး vardenafil ၏ Pro ကို-erectile အကျိုးသက်ရောက်မှု: ယုန်အတွက်စသည်တို့စမ်းသပ်ချက်နှင့်ကြွက်များတွင် sildenafil နှင့်အတူ Vivo နှိုင်းယှဉ်ပါ။ EUR Urol ။ 2003; 44: 731-736 [PubMed] ။
45.Giuliano က F, Rampin အိုဘရောင်း K ကို Courtois က F, Benoit, G, အ hypothalamus ၏ media1 preoptic ဧရိယာ၏ Jardin အေစိတ်ကြွဆေးကြွက်များတွင် intracavernous ဖိအားတိုး elicits ။ neuroscience လက်တ။ 1996; 209: 1-4 [PubMed] ။
46.Grunt ဂျာလူငယ် WC ။ အထီး guinea ဝက်အတွက်အော်ဂဇင်ကိုအောက်ပါပင်ပန်းနွမ်းနယ်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်မွမ်းမံ (သုတ်ရည်လွှတ်) ။ J ကို comp Physiol Psychol ။ 1952; 45: 508-510 [PubMed] ။
47.Hadeishi Y ကို, Wood က RI က။ အထီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားကဦးနှောက်၏မိတ်လိုက်အပြုအမူ circuitry အတွက်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase ။ J ကို Neurobiol ။ 1996; 30: 480-492 [PubMed] ။
48.Holmes GM က, Chapple WD, Leipheimer RE, Sachs bd ။ သုတ်ရည်ထိနှင့် reflex စိုက်ထူစဉ်အတွင်းအထီးကြွက် perineal ကြွက်သား Electromyographic ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1991; 49: 1235-1246 [PubMed] ။
GM က, Hermann GE, ရော်ဂျာ RC, Bresnahan JC, Beatty က MS 49.Holmes ။ eliminatory နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုပေါ်တွင်နျူကလိယ raphe obscurus ဒါမှမဟုတ် rostral ventrolateral medulla ကိုတွေ့ရှိရပါသည်များ၏သက်ရောက်မှုများ Dissociation ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2002; 75: 49-55 [PubMed] ။
50.Hull EM, ဒူ J ကို, Lorraine DS, အ medial preoptic ဧရိယာ၌ Matuszewich အယ်လ် Extracellular dopamine: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်သုတ်ရည်ထိဟော်မုန်းကိုထိန်းချုပ်ဘို့ဂယက်ရိုက်။ J ကို neuroscience ။ 1995; 15: 7465-7471 [PubMed] ။
51.Hull EM, Lumley LA က, Matuszewich L ကို, Dominguez J ကိုမောရှေသည်ဂျေ, Lorraine DS ။ အထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအတွက်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်၏အခန်းကဏ္ဍ။ Neuropharmacology ။ 1994; 33: 1499-1504 [PubMed] ။
52.Hull EM, Meisel RL, Sachs bd ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ ခုနှစ်တွင်: Pfaff DW, အာနိုးက AP, Etgen လေး, Fahrbach SE, Rubin က RT ကို, အယ်ဒီတာများ။ ဟော်မုန်း, ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူ။ ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 2002 ။ စစ။ 3-137 ။
53.Hull EM, Wood က RI က, McKenna Ke ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ neurobiology ။ ခုနှစ်တွင်: Neill J ကို, Donald Pfaff, အယ်ဒီတာများ။ မျိုးပွားခြင်း၏ဇီဝကမ္မဗေဒ။3။ Elsevier စာနယ်ဇင်း; 2006 ။ စစ။ 1729-1824 ။
PJ, Nyby JG 54.James ။ testosterone လျှင်မြန်စွာအိမ်သူအိမ်သားကြွက်တွေ (Mus musculus) Physiol ပြုမူနေအတွက် copulatory အပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးသက်ရောက်သည်။ 2002; 75: 287-294 [PubMed] ။
55.Kollack-Walker က S နဲ့, Newman က SW ။ အထီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားကဦးနှောက်ထဲမှာက c-fos ၏မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်စကားရပ်: အတွေ့အကြုံ, pheromones နှင့်သုက်၏အခန်းက္ပ။ J ကို Neurobiol ။ 1997; 32: 481-501 [PubMed] ။
56.Kondo Y ကို, အ medial amygdala နှင့်အထီးကြွက်များတွင်အပြုအမူအဖော်ရှာ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် medial preoptic ဧရိယာအကြား Arai Y. Functional အသင်းအဖွဲ့။ Physiol ပြုမူနေ။ 1995; 57: 69-73 [PubMed] ။
57.Krey LC, McGinnis MY ။ gonadotropin လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်အတူပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး: castrated အထီးကြွက်ဖို့ဦးနှောက်နှင့် adenohypophysis အောက်ပါ testosterone ဟော်မုန်းအုပ်ချုပ်မှု / ရုပ်သိမ်းရေးအတွက်နျူကလီးယားအန်ဒရိုဂျင် + အဲဒီ receptor ရှုပ်ထွေးသော၏အသွင်အပြင် / ပျောက်ဆုံးမှုအချိန်-သင်တန်းများ။ J ကို Steroid တစ်မျိုးထဲကဓာတုပစ်စညျး။ 1990; 35: 403-408 [PubMed] ။
LJ, ဒေမ GE, Huang က PL, ဘားနက် AL, နယ်လ်ဆင် RJ 58.Kriegsfeld ။ Physiol ပြုမူနေ endothelial နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase (- - / ဧနုတ်သည်) အတွက်မျိုးဗီဇချို့တဲ့ကြွက်တွေမှာ Ejaculatory မူမမှန်။ 1999; 67: 561-566 [PubMed] ။
59.Kudwa AE, Dominguez-Salazar အီး Cabrera DM, Sibley DR, Rissman EF ။ Dopamine D5 အဲဒီ receptor ကြွက်တွေမှာယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ modulates ။ Psychopharmacology ။ 2005; 180: 206-14 [PubMed] ။
60.Lagoda, G, Muschamp JM, Vigdorchik တစ်ဦးက, Hull က EM ။ အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာ inhibitorin တစ်ဦးကနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase အထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်ထိနဲ့လှုံ့ဆော်မှုာင်းဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2004; 118: 1317-1323 [PubMed] ။
61.Lehman MN, လုပ်ပိုင်ခွင့်များ JB, Winans အက်စ်အက်စ်။ Stria terminalis ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ယောက်ျားရွှေကြွက်များတွင် copulatory အပြုအမူ၏ယာယီပုံစံပြောင်းလဲပစ်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1983; 8: 109-128 [PubMed] ။
62.Leipheimer RE, Sachs bd ။ ကြွက်များတွင် penile တုံ့ပြန်မှုများနှင့်သုတ်ရည်ထိ GABAergic စည်းမျဉ်း။ Physiol ပြုမူနေ။ 1988; 42: 351-357 [PubMed] ။
63.Leyton M က, Stewart ကဂျေထူးခြားသောနှင့်အမြီးအဖြစ်တော့နေဖြင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ထပ်ခါတလဲလဲ activation: opioid နှင့် dopaminergic ယန္တရားများ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1996; 60: 77-85 [PubMed] ။
64.Liu YC, Salamone JD, Sachs bd ။ သားယောက်ျားကိုကြွက်များတွင် hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ၏တွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက်ချို့ယွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1997a; 111: 1361-1367 [PubMed] ။
65.Liu YC, Salamone JD, Sachs bd ။ stria terminalis ၏ medial preoptic ဧရိယာနှင့်အိပ်ရာနျူကလိယထဲမှာကိုတွေ့ရှိရပါသည်: အထီးကြွက်များတွင် copulatory အပြုအမူနှင့် noncontact စိုက်ထူအပေါ် Differential ဆိုးကျိုးများ။ J ကို neuroscience ။ 1997b; 17: 5245-5253 [PubMed] ။
66.Lopez နာရီ, သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်း Ettenberg အေ Haloperidol စိန်ခေါ်မှုအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအတွက်နောက်ဆက်တွဲတိုးကာကွယ်ပေးသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2000; 67: 387-393 [PubMed] ။
67.Lopez နာရီ, Ettenberg အေ Dopamine ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း estrous အမျိုးသမီးတွေကိုချွင်းချက်မရှိမက်လုံးပေးတန်ဖိုးကို attenuates ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2001; 68: 411-416 [PubMed] ။
68.Lopez နာရီ, အမျိုးသမီးကြွက်မှ Ettenberg အေ Exposure လိင်-ရင်တော့မှားမယ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိအထီးကြွက်အကြားက c-fos သော induction အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုထုတ်လုပ်သည်။ ဦးနှောက် Res ။ 2002a; 947: 57-66 [PubMed] ။
69.Lopez နာရီ, Ettenberg အေလိင်အေးစက်မက်လုံးပေး: dopamine အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းစဉ်အတွင်းစိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှု၏ attenuation ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2002b; 72: 65-72 [PubMed] ။
70.Lorrain DS, Matuszewich L ကို, Friedman RD, Hull က EM ။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic ဧရိယာ၌ Extracellular serotonin postejaculatory ကြားကာလအတွင်းမှာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်ထိချို့ယွင်းဖြစ်ပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 1997; 17: 9361-9366 [PubMed] ။
71.Lorrain DS, Riolo ဖက်စပ်, Matuszewich L ကို, Hull က EM ။ lateral hypothalamic serotonin နျူကလိယ dopamine accumbens ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန့်ကျင်ဘက်များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ J ကို neuroscience ။ 1999; 19: 7648-7652 [PubMed] ။
72.Lumley LA က, Hull က EM ။ တစ်ဦး dl ရန်နှင့် medial preoptic နျူကလိယထဲမှာသုတ်ရည်ထိ-သွေးဆောင် Fos ကဲ့သို့ immunoreactivity အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏ဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက် Res ။ 1999; 829: 55-68 [PubMed] ။
73.Maeda N ကို, Matsuoka N ကို, dopaminergic နှင့် cholinergic စိတ်ကြွဆေးများကသွေးဆောင်ယာမာဂူချီဗြဲ Septohippocampal cholinergic လမ်းကြောင်းနှင့် penile စိုက်ထူ။ ဦးနှောက် Res ။ 1990; 537: 163-168 [PubMed] ။
, CA, Edwards က DA 74.Maillard ။ အဆိုပါဇုန် incerta / နှစ်ဦးနှစ်ဖက် tegementum စဉ်ဆက်၏ Excitotoxin ကိုတွေ့ရှိရပါသည်: ကြွက်များတွင်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1991; 46: 143-149 [PubMed] ။
75.Malmnas အဆိုပါ castrated အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ L-dopa သွေးဆောင်ပံ့ပိုးအခြား catecholamines နှိုင်းယှဉ် dopamine ၏ CO ။ အဆိုပါအဓိပ်ပာယျ, ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1976; 4: 521-526 [PubMed] ။
76.Manzo J ကို, Cruz MR, ဟာနန်ဒက်ဇ် ME, Pacheco P ကို, Sachs bd ။ gonadal steroids အားဖြင့်ကြွက်များတွင် noncontact စိုက်ထူ၏စည်းမျဉ်း။ Horm ပြုမူနေ။ 1999; 35: 264-270 [PubMed] ။
77.Markowski VP, Hull က EM ။ Cholecystokinin အထီးကြွက် copulatory အပြုအမူအပေါ် mesolimbic dopaminergic လွှမ်းမိုးမှု modulates ။ ဦးနှောက် Res ။ 1995; 699: 266-274 [PubMed] ။
78.Marson L ကို, McKenna Ke ။ အထီးကြွက်များတွင်ကျောရိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ brainstem site ၏မှတ်ပုံတင်။ ဦးနှောက် Res ။ 1990; 515: 303-308 [PubMed] ။
79.Marson L ကို, McKenna Ke ။ ကျောရိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု၏တားစီးဆငျးအတွက် 5-hydroxytryptamine တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ Exp ဦးနှောက် Res ။ 1992; 88: 313-320 [PubMed] ။
80.Marson L ကို, McKenna Ke ။ Serotonergic neurotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုလွယ်ကူချောမွေ့။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1994a; 47: 883-888 [PubMed] ။
81.Marson L ကို, McKenna Ke ။ အဆိုပါ hypothalamus ၏ stimulation အထီးကြွက်များတွင် urethrogenital တုံ့ပြန်မှုစတင်။ ဦးနှောက် Res ။ 1994b; 638: 103-108 [PubMed] ။
82.Marson L ကို, စာရင်းက MS, McKenna Ke ။ ယင်းနျူကလိယ၏တွေ့ရှိရပါသည်ဟောင်း copula penile တုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲ paragigantocellularis ။ ဦးနှောက် Res ။ 1992; 592: 187-192 [PubMed] ။
83.Mas M က, Fumero B, မိတ်လိုက်အပြုအမူ၏ဖာရက်-Rodriguez ဗြဲ induction လိင် ့. , ကြွက်များတွင် apomorphine ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ယူရို J ကို Pharmacol ။ 1995; 280: 331-334 ။
84.Matsumoto T က, ဟွန်ဒါ S က, Harada N. ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် aromatase ဗီဇချို့တဲ့အထီးကြွက်တွေမှာလိင်-တိကျတဲ့အပြုအမူတွေကိုပါ။ Neuroendocrinology ။ 2003; 77: 416-424 [PubMed] ။
85.McGill TE, Manning အေ genotype နှင့် castrated အထီးကြွက်များတွင် ejaculatory တုံ့ပြန်မှု၏ retention ကို။ Animation ပြုမူနေ။ 1976; 24: 507-518 [PubMed] ။
86.McGinnis MY, Dreifuss RM ။ အထီးကြွက်များတွင်ပုလ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖြန်ဖြေအတွက် testosterone ဟော်မုန်း-အန်ဒရိုဂျင် receptor interaction ကတစ်အခန်းကဏ္ဍများအတွက်အထောက်အထား။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 1989; 124: 618-626 [PubMed] ။
87.McGinnis MY, Mirth MC, Zebrowski AF, Dreifuss RM ။ ကြွက်များတွင်ယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအန်ဒရိုဂျင်ကို Activation များအတွက်အရေးပါထိတွေ့မှုအချိန်။ Physiol ပြုမူနေ။ 1989; 46: 159-165 [PubMed] ။
88.Meisel RL, Sachs bd ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဇီဝြဖစ်စဉ်။ ခုနှစ်တွင်: Knobil အီး, Neill JD, အယ်ဒီတာများ။ မျိုးပွား၏ဇီဝကမ္မဗေဒ။2။ ကျီးစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 1994 ။ စစ။ 3-106 ။
89.Meisel RL, O'Hanlon JK, Sachs bd ။ castrated အထီးကြွက်များတွင် gonadal ဟော်မုန်းအားဖြင့် penile တုံ့ပြန်မှုများနှင့် copulatory အပြုအမူများ differential ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။ Horm ပြုမူနေ။ 1984; 18: 56-64 [PubMed] ။
90.Melis MR, Stancampiano R ကို, Argiolas အေ Hippocampal oxytocin apomorphine-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဟနေခြင်း mediates ။ Pharm ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1992; 42: 61-66 ။
91.Melis MR, Succu S က, Mascia က MS, Cortis L ကို, အ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက် Argiolas အေ Extra-ဆယ်လူလာ dopamine တိုး: penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဟနေခြင်းနှင့်အတူဆက်စပ်မှု။ EUR J ကို neuroscience ။ 2003; 17: 1266-1272 [PubMed] ။
92.Melis MR, Succu S က, Mascia က MS, Cortis L ကို, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်းအထီးကြွက်များ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက် Argiolas အေ Extracellular excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ်တိုး: erectile function ကိုအတွက် N-methyl-D-aspartic အက်ဆစ် receptors ၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2004; 19: 2569-2575 [PubMed] ။
93.Melis MR, Succu S က, Mauri တစ်ဦးက, Argiolas အေ Nitric oxide ကိုထုတ်လုပ်မှုသည် non-အဆက်အသွယ် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်းအထီးကြွက်များ၏ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယတိုးမြှင်ဖြစ်ပါတယ်။ EUR J ကို neuroscience ။ 1998; 10: 1968-1974 [PubMed] ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမတိုင်မီ 94.Meredith အမ် Vomeronasal ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုဖယ်ထုတ်အထီးဟမ်းစတားမိတ်လိုက်အပြုအမူချို့ယွင်း။ Physiol ပြုမူနေ။ 1986; 36: 737-743 [PubMed] ။
95.Moses J ကို, Hull က EM ။ အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာသို့အုပ်ချုပ်ခွင့်တစ်ဦးကနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ပေါင်းစပ် inhibitor တစ်ဦးဖြစ်သူ copula တုံ့ပြန်မှုစမ်းသပ်မှုအတွက်ဟောပြောမှုတွေထုတ်လွှတ်မှုကိုတိုးပွားစေပါသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1999; 63: 345-348 [PubMed] ။
96.Mosig DW, Dewsbury DA ။ အိမ်သူအိမ်သားကြွက် (Mus musculus) ပြုမူနေ Biol ၏ copulatory အပြုအမူလေ့လာရေး။ 1976; 16: 463-473 [PubMed] ။
97.Nyby J ကို, Matochik ဂျာ Barfield RJ ။ အိမ်သူအိမ်သားကြွက်များတွင်အထီး-ပုံမှန်အပြုအမူ၏ Intracranial အန်ဒရိုဂျင်နှင့်အီစထိုဂျင်ဆွ, Mus domesticus) Horm ပြုမူနေ။ 1992; 26: 24-45 [PubMed] ။
98.Ogawa S ကိုက Chester AE, ဝစ် SC, Walker က VR, Gustafsson ဂျာအီစထိုဂျင်ချို့တဲ့ကြွက်တွေမှာအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ Smithies O. ဖျက်သိမ်းမှု alpha နဲ့ beta ကို (alpha beta ကို ERKO) proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2000 receptors; 97: 14737 -14741 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
99.Ogawa S က, Robbins တစ်ဦးက, Kumar က N ကို, Pfaff DW, Sundaram K ကို Bardin CW ။ အထီးကြွက်နှစ်ခု inbred မျိုးကွဲများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရန်လိုအပြုအမူတွေအပေါ် Testosterone နဲ့7alpha-methyl-19-nortestosterone (MENT) ၏ဆိုးကျိုးများ။ Horm ပြုမူနေ။ 1996; 30: 74-84 [PubMed] ။
100.Ogawa S က, Washburn TF, တေလာ J ကို, Lubahn DB, Korach KS, Pfaff DW ။ အထီးကြွက်တွေမှာအီစရိုဂျင် receptor-alpha-ဗီဇနှောင့်အယှက်များက testosterone ဟော်မုန်း-မှီခိုအပြုအမူတွေ၏ပြုပြင်မွမ်းမံ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 1998; 139: 5058-5069 [PubMed] ။
101.O'Hanlon JK, Meisel RL, Sachs bd ။ Estradiol copula အတွက်အထီးကြွက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု castrated, ဒါပေမယ့်ဟောင်းမဟုတ် copula ထိန်းသိမ်းထားသည်။ Neur Biol ပြုမူနေ။ 1981; 32: 269-273 ။
102.Olsen KL ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကွဲပြားခြားနားမှုအပေါ်မျိုးရိုးဗီဇသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ခုနှစ်တွင်: Gerall AA ကို, Moltz H ကို, ရပ်ကွက် IL, အယ်ဒီတာများ။ လိင်ကွဲပြားခြားနားမှု, အမူအကျင့် neurobiology ၏လက်စွဲစာအုပ်။ Plenum စာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 1992 ။ စစ။ 1-40 ။
103.Paredes RG, အဘိဓါန် Highland L ကို, အ medial preoptic ဧရိယာ၏တွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက်အထီးကြွက်များတွင် Karam P. လူမှု-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: လျှော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အထောက်အထား။ ဦးနှောက် Res ။ 1993; 618: 271-276 [PubMed] ။
104.Paredes RG, Tzschentke T က, အ medial preoptic ဧရိယာ / anterior hypothalamus (MPOA / AH) ၏ Nakach N. ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အထီးကြွက်များတွင်မိတ်ဖက် preference ကိုပြုပြင်မွမ်းမံ။ ဦးနှောက် Res ။ 1998; 813: 81-83 ။
EA ၏, Thompson က JT, Hull က EM 105.Pehek ။ အထီးကြွက်များတွင် penile တုံ့ပြန်မှုများနှင့်သုတ်ရည်ထိပေါ် dopamine agonist apomorphine ၏ intrathecal အုပ်ချုပ်ရေး၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology ။ 1989b; 99: 304-308 [PubMed] ။
106.Pfaus JG, Wilkins MF ။ တစ်ဦးကဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်လိင်ရင်တော့မှားမယ်မဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိအထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်ထိ disrupts: naloxone နှင့်အတူတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်။ Physiol ပြုမူနေ။ 1995; 57: 1045-1049 [PubMed] ။
107.Popova NK, Amstislavskaya TG ။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်စိတ်နိုးထအတွက် 5-HT (1A) နှင့် 5-HT (1B) serotonergic အဲဒီ receptor Subtype ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Psychoneuroendocrinol ။ 2002; 27: 609-618 ။
108.Putnam SK ကို, Sato က S, Hull က EM ။ သင်းအတွက်သုတ်ရည်ထိဟော်မုန်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု: MPOA အတွက် extracellular dopamine နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့။ Horm ပြုမူနေ။ 2003; 44: 419-426 [PubMed] ။
109.Putnam SK ကို, Sato က S, Hull က EM ။ သုတ်ရည်ထိ, medial preoptic dopamine အကြောင်းအရာနှင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase အပေါ် testosterone ဟော်မုန်း metabolites ၏ဆိုးကျိုးများ။ Horm ပြုမူနေ။ 2005; 47: 513-522 [PubMed] ။
110.Rampin အိုဂျရုမ်း N ကို, ကြွက်များတွင် apomorphine ၏ Suaudeau C. Proerectile ဆိုးကျိုးများ။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 2003; 72: 2329-2336 [PubMed] ။
111.Rissman EF, Wersinger SR, Fugger HN, Foster TC ။ အီစရိုဂျင် receptor alpha ၏အမူအကျင့်လေ့လာမှုများ: နောက်ကောက်မော်ဒယ်များနှင့်အတူလိင်။ ဦးနှောက် Res ။ 1999; 835: 80-90 [PubMed] ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအခန်းကဏ္ဍများအတွက်နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထား: 112.Rodriguez-Manzo G. အ Yohimbine လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ satiation reverse ဖို့ dopaminergic စနစ်ဖြင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်။ EUR J ကို Pharmacol ။ 1999; 372: 1-8 [PubMed] ။
113.Rodriguez-Manzo, G, yohimbine, naloxone နှင့် 8-Oh-DPAT အားဖြင့်လိင်မောကြွက်၏ copulatory အပြုအမူများပြန်လည်ဖြစ်ထွန်းအတွက်ဗဟို noradrenergic စနစ်၏ဖာနန်ဒက်ဇ-Guasti အေပါဝင်လာခြင်း။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 1995; 38: 399-404 [PubMed] ။
114.Rodriguez-Manzo, G, လိုပက်ဇ်-Rubalcava ကို C, Hen R ကို, ကြွက်၏ပုလ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် serotonin ၏ inhibitory လုပ်ရပ်များအတွက် 5-HT (1B) receptors ၏ဖာနန်ဒက်ဇ-Guasti အေပါဝင်လာ: pharmacological ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ 5-HT အတွက် (1B ) အဲဒီ receptor ခေါက်ထွက်ကြွက်။ Brit J ကို Pharmacol ။ 2002; 136: 1127-1134 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
115.Rodríguez-Manzo, G, Pellicer က F, Larsson K သည်, ထို medial preoptic ဧရိယာ၏ဖာနန်ဒက်ဇ-Guasti အေစိတ်ကြွဆေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ satiation reverse မထားဘူး။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2000; 114: 553-560 [PubMed] ။
116.Romeo RD, Parfitt DB, ရစ်ချတ်ဆန် HN, Sisk CL ။ pheromones prepubertal နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက် Fos-immunoreactivity ၏ညီမျှသောအဆင့်ဆင့်ထုတ်ယူ။ Horm ပြုမူနေ။ 1998; 34: 48-55 [PubMed] ။
117.Romeo RD, ရစ်ချတ်ဆန် HN, Sisk CL ။ အပျိုဖော်ဝင်နှင့်အထီးဦးနှောက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ရငျ့: တစ်အပြုအမူအလားအလာ recasting ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2002; 26: 381-391 [PubMed] ။
118.Roselli အီး, Thornton je, ကုန်သည်များ KC ။ ဦးနှောက် estrogen receptor နှင့်အထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ခေတ်-related လိုငွေပြမှု။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1993; 107: 202-209 [PubMed] ။
119.Sachs bd ။ ကျောရိုးအထီးအိမ်သူအိမ်သားကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု။ Physiol ပြုမူနေ။ 1980; 24: 489-492 [PubMed] ။
120.Sachs bd ။ အာနိသင်နှင့်ကလေးမွေးဖွား: ဟော်မုန်းများနှင့်စက်မှုအကြောင်းရင်းများနှင့်ကြွက်များတွင် penile လုပ်ရပ်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ခုနှစ်တွင်: Balthazart J ကို, သကျသပွေအီး, Gilles R ကို, အယ်ဒီတာများ။ အဆင့်မြင့်ကျောရိုးရှိသတ္တဝါထဲမှာဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ Springer-Verlag; ဘာလင်: 1983 ။ စစ။ 86-110 ။
121.Sachs bd, Bitran ဃကျောရိုးပိတ်ပင်တားဆီးမှုကြွက်များတွင် reflex စိုက်ထူ၏စေ့စပ်ဖြန်ဖြေအတွက်ဦးနှောက်နှင့်ကျောရိုးအဘို့အခန်းကဏ္ဍဖော်ပြသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1990; 528: 99-108 [PubMed] ။
122.Sachs bd, Valcourt RJ, Flagg HC ။ Copulatory အပြုအမူနှင့် naloxone နဲ့ကုသအထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1981; 14: 251-253 [PubMed] ။
123.Sala M က, Braida: D, Leone အမတ်, Calcaterra P ကို, Monti က S, ကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် yohimbine ၏ Gori အီးဗဟိုအကျိုးသက်ရောက်မှု။ Physiol ပြုမူနေ။ 1990; 47: 165-173 [PubMed] ။
124.Sato Y ကို, Wada H ကို, Horita H ကို, ဆူဇူကီး N ကို, Shibuya တစ်ဦးက, Adachi H ကို, Kato R ကို, Tsukamoto T က, ကြွက်များတွင်အထီး copulatory အပြုအမူစဉ်အတွင်း medial preoptic ဧရိယာ၌ Kumamoto Y. Dopamine လွှတ်ပေးရန်။ ဦးနှောက် Res ။ 1995; 692: 66-70 [PubMed] ။
125.Scaletta ll, Hull က EM ။ စနစ်သို့မဟုတ် intracranial apomorphine ရေရှည် castrated အထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်ထိတိုးပွားစေပါသည်။ Pharm ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1990; 37: 471-475 ။
126.Schnur SL, Smith က ER, Lee က RL, Mas M က, Davidson JM ။ အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် DPAT ၏သက်ရောက်မှု၏အစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1989; 45: 897-901 [PubMed] ။
127.Schultz KM ရစ်ချတ်ဆင် HN, Romeo RD, မောရစ်ဂျာ Lookingland KJ, Sisk CL ။ အမျိုးသမီး pheromones မှ Medial preoptic ဧရိယာ dopaminergic တုံ့ပြန်မှုယောက်ျားဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းဖွံ့ဖြိုး။ ဦးနှောက် Res ။ 2003; 988: 139-145 [PubMed] ။
128.Schultz KM ရစ်ချတ်ဆင် HN, Zehr JL, Osetek AJ, Menard က TA, Sisk CL ။ Gonadal ဟော်မုန်းယောက်ျားဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းမျိုးဆက်ပွားအပြုအမူတွေ masculinize နှင့် defiminize ။ Horm ပြုမူနေ။ 2004; 45: 242-249 [PubMed] ။
129.Scordalakes EM, Shetty က SJ, Rissman EF ။ အာရုံခံနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထဲမှာအီစရိုဂျင် receptor alpha နှင့်အန်ဒရိုဂျင် receptor ၏အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို comp Neurol ။ 2002; 453: 336-344 [PubMed] ။
130.Shimura T က, Yamamoto T က, Shimokochi အမ်အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာအထီးကြွက်များတွင်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်: Re-အကဲဖြတ်အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တိရိစ္ဆာန်များရွေ့လျား၌တည်၏။ ဦးနှောက် Res ။ 1994; 640: 215-222 [PubMed] ။
131.Simerly RB, Swanson LW ။ ကြွက်များ၏ medial preoptic နျူကလိယမှအာရုံကြောဆိုင်ရာသွင်းအားစု၏အဖှဲ့အစညျး။ J ကို comp Neurol ။ 1986; 246: 312-342 [PubMed] ။
132.Simerly RB, Swanson LW ။ အဆိုပါ medial preoptic နျူကလိယ၏ projections: တစ် Phaseolis ကြွက်များတွင် anterograde ကျေးရွာအုပ်စု-tracing လေ့လာမှု leucoagglutinin vulgaris ။ J ကို comp Neurol ။ 1988; 270: 209-242 [PubMed] ။
133.Sinchak K ကို Roselli အီး, Clemens LG က။ သွေးရည်ကြည် steroids, aromatase လှုပ်ရှားမှုနှင့် preoptic ဧရိယာထဲမှာအီစထိုဂျင် receptors, hypothalamus နှင့်သင်းပြီးနောက် copulatory အပြုအမူများ၏ Display ကိုအတွက်ကွာခြားကြောင်း B6D2F1 အထီးအိမ်သူအိမ်သားကြွက်၏ amygdala ၏ levels ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1996; 110: 593-602 [PubMed] ။
134.Sipos ML, Nyby JG ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၏တပြိုင်တည်းအန်ဒရိုဂျင်ဆွနှင့် preoptic ဧရိယာ medial: အိမ်သူအိမ်သားကြွက်များတွင်အထီး-ပုံမှန်မျိုးပွားအပြုအမူတွေအပေါ်များ၏ညှိနှိုင်းဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက် Res ။ 1996; 729: 29-44 [PubMed] ။
135.Smith ER, Lee က RL, Schnur SL, Davidson JM ။ alpha 2-adrenoceptor ရန်နှင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: ဗြဲအိမ်ထောင်ဖက်အပြုအမူ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1987a; 41: 7-14 [PubMed] ။
136.Steers WD, က de Groat WC ။ ကြွက်များတွင် penile နှင့်ဆီးအိမ် function ကိုအပေါ်မီတာ-chlorophenylpiperazine ၏ဆိုးကျိုးများ။ နံနက် J ကို Physiol ။ 1989; 257: R1441-1449 [PubMed] ။
137.Sugiura K ကို Yoshimura H ကို, အထီးကြွက်များတွင်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုများကသွေးဆောင် copulatory ရောဂါ Yokoyama အမ်တစ်ခုကတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်: apomorphine နဲ့ L-dopa ၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology ။ 1997; 133: 249-255 [PubMed] ။
138.Szczypka က MS, Zhou QY, Palmiter RD ။ Dopamine-နှိုးဆွလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကြွက်များတွင်မှီခို testosterone ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1998; 112: 1229-1235 [PubMed] ။
139.Tallentire: D, McRae, G, Spedding R ကို, Clark က R ကို, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Vickery ခ Modulation ကြွက်အတွက်အစွမ်းထက်နှင့်ရွေးချယ် 2-adrenoceptor ရန်အသုံးပြုပုံ delequamine, (သည် RS-15385-197) Brit J ကို Pharm ။ 1996; 118: 63-72 ။
140.Temple JL, Scordalakes EM, Bodo အဘိဓါန်ကို C, Gustafsson ဂျာ Rissman EF ။ အလုပ်လုပ်တဲ့အီစရိုဂျင် receptor beta ကိုဗီဇမရှိခြင်း pubertal အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ disrupts ။ Horm ပြုမူနေ။ 2003; 44: 427-434 [PubMed] ။
141.Thornton je, Irving S က, Goy RW ။ guinea ဝက်၏ပုလ်နှင့် defeminization အပေါ်ကိုယ်ဝန်ဆောင် antiandrogen ကုသမှုဆိုးကျိုးများ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1991; 50: 471-475 [PubMed] ။
142.Valenstein ES, Riss W က, Young က WC ။ အထီး guinea ဝက်၏ဗီဇပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောခြင်းနှင့်အလွန်အမင်း inbred မျိုးကွဲများတွင်လိင် drive တခုဖြစ်တယ်။ J ကို comp Physiol Psychol ။ 1954; 47: 162-165 [PubMed] ။
143.Triemstra JL, Nagatani S က, Wood က RI က။ Chemosensory တွေကိုအထီးဆီးရီးယားဟမ်းစတား၏ MPOA အတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2005; 30: 1436-1442 [PubMed] ။
144.Truitt WA, Coolen LM ။ အဆိုပါကျောရိုးတစ်အလားအလာသုတ်ရည်လွှတ်မီးစက်၏ identification ။ သိပ္ပံ။ 2002; 297: 1566-1569 [PubMed] ။
145.Truitt WA, Shipley MT, Veening JG, Coolen LM ။ အထီးပေမယ့်အမျိုးသမီးမဟုတ်ပါဘူးကြွက်များတွင် copulatory အပြုအမူပြီးနောက် lumbar spinothalamic အာရုံခံတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်၏ activation ။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 325-31 [PubMed] ။
McGinnis MY, ME 146.Vagell ။ အထီးကြွက်မျိုးပွားမှုအပြုအမူများပွနျလညျထူထောငျအတွက်မွှေးကြိုင်၏အခန်းကဏ္ဍကို။ J ကို Neuroendocrinol ။ 1997; 9: 415-421 [PubMed] ။
147.van Furth WR, ဗန် Ree JM ။ Endogenous opioids နှင့်လိင်လှုံ့ဆျောမှုနှင့် diurnal သံသရာ၏အလင်းကိုအဆင့်စဉ်အတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1994; 636: 175-179 [PubMed] ။
148.Vega Matuszcyk J ကို, Larsson K ကို Eriksson အီးအဆိုပါရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitor fluoxetine အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုလျော့နည်းစေသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1998; 60: 527-532 [PubMed] ။
149.Wersinger SR, Rissman EF ။ estrogen receptor alpha အမျိုးသမီး-ညွှန်ကြား chemo-investigatory အပြုအမူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေမယ့်အထီးကြွက်များတွင် pheromones-သွေးဆောင် luteinizing ဟော်မုန်းမြင့်တက်ဘို့မလိုအပ်ပါ။ J ကို Neuroendocrinol ။ 2000a; 12: 103-110 [PubMed] ။
150.Wersinger SR, Rissman EF ။ Dopamine ဟာအီစရိုဂျင် receptor alpha ၏လွတ်လပ်သောပုလ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမြှင့်လုပ်ဆောင်။ J ကို neuroscience ။ 2000b; 20: 4248-4254 [PubMed] ။
151.Wersinger SR, Sannen K ကို Villalba ကို C, Lubahn DB, Rissman EF, De Vries GJ ။ ပုလ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုအလုပ်လုပ်တဲ့အီစရိုဂျင် receptor alpha ဗီဇချို့တဲ့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်။ Horm ပြုမူနေ။ 1997; 32: 176-183 [PubMed] ။
152.Westberry J ကို, Meredith အမ် chemosensory input ကိုနှင့်အထီးဟမ်းစတားအတွက်အပြုအမူဆားကစ်အဖော်ရှာအပေါ်ဖြန့်ချိဟော်မုန်း gonadotropin ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 2003; 974: 1-16 [PubMed] ။
153.Witt DM, Insel TR ။ ပုလ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအောက်ပါအာရုံခံ oxytocin အတွက်တိုးမြှင့် Fos စကားရပ်။ J ကို Neuroendocrinol ။ 1994; 6: 13-18 [PubMed] ။
RI က 154.Wood ။ အဆိုပါ medial amygdala အတွက် Estradiol, ဒါပေမယ့်မရ dihydrotestosterone, အထီးဟမ်းစတားလိင်အပြုအမူကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ Physiol ပြုမူနေ။ 1996; 59: 833-841 [PubMed] ။
RI က, Newman က SW 155.Wood ။ chemosensory နှင့်ဟော်မုန်းတွေကိုပေါင်းစည်းရေးယောက်ျားဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်အဖော်ရှာဘို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ J ကို neuroscience ။ 1995; 15: 7261-7269 [PubMed] ။
156.Yamada K ကို Emson P ကို, neuropeptides အတူကြွက် hypothalamus နှင့် colocalization အတွက်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase ၏ Hokfelt တီ Immunohistochemical မြေပုံ။ J ကို Chem Neuroanat ။ 1996; 10: 295-316 [PubMed] ။
DP, Hendrick SE, Prendergast MA 157.Yells ။ ယင်းနျူကလိယ၏တွေ့ရှိရပါသည်အထီးကြွက်များတွင်မိတ်လိုက်အပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှု paragigantocellularis ။ ဦးနှောက် Res ။ 1992; 596: 73-79 [PubMed] ။
158.Zarrindast MR, Mamanpush သည် SM, Rashidy-လောင်းအေမော်ဖင်းအကိုက်ကြွက်များတွင်သုတ်ရည်လွှတ်သွေးဆောင် dopaminergic နှင့် cholinergic ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Pharmacol ။ 1994; 25: 803-808 [PubMed] ။